ပေါ်ကြေးတို့က မေ့တတ်သည့်နေရာ မျိုးနှင့် ရိုးနှင့်ဟုဆိုရမည်ထင်သည်။ ပေါ်ကြေးတို့ အဖေလည်း မေ့တတ်သည်။အမေလည်း မေ့တတ်သည်။ ပေါ်ကြေးတို့ အဘိုးလည်း မေ့တတ်သည်။ ပေါ်ကြေးတို့ အဘိုးမေ့တတ်ပုံလေး ပြောပါဦးမည်။ပေါ်ကြေးတို့ အဘိုးက စာမတတ်ပေမယ့် လည်လည်ဝယ်ဝယ်ရှိသည်။ ပေါ်ကြေးတို့က အညာဒေသ အပူပိုင်းဆိုတော့ တပေါင်းတန်ခူးတောင်သူ လုပ်ငန်းတွေ သိမ်းပြီးရင် နှစ်လတန်စီ သုံးလတန်စီ နားနေရတာကများသည်။ နွေရာသီမှာ နားမနေချင်တာနှင့်သစ်သီးသစ်နှံလေးရောင်းချပြီး အောက်ပြည်၊ အောက်ရွာသွားကာ ဆန်ကုန်ကူးသည်။ ပထမတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်တော့ ဆန်လေးသယ်လာလိုက် ပြန်ရောင်းချလိုက်နှင့် ရွာကိုသတိရသေးသည်။ မိသားစုကိုလည်း မှတ်မိသေးသည်။ သုံးလေးခေါက်လည်း ကြာပြီးရော တဖြည်းဖြည်းနှင့် မိသားစုကိုရော ရွာကိုပါ မေ့တေ့တေ့ဖြစ်လာသည်။ နောက်တော့ ရွာကို လုံးဝပေါ်မလာတော့ဘူး။ ရွာကိုမေ့၊ မိသားစုကိုမေ့၊ ပေါ်ကြေးတို့ အဖွားကိုပါ မေ့သွားသည်။ သူ့ကိုယ်သူလူပျိုထင်ပြီး အောက်ပြည်အောက်ရွာမှာတင် တစ်အိုးတစ်အိမ် ထူထောင်လိုက်သည်။
"မင်းတို့ အဖိုးမေ့တတ်ပုံများ ပြောမပြောချင်ဘူး။ သူ့ကိုယ်သူ လူပျိုထင်ပြီး
မိန်းမယူလိုက်တာ ကလေးနှစ်ယောက်ရမှ အဖွားကို
ပေါ်ကြေးတို့ အဖွားဆိုတာ ပြောလို့ကို မပြီးတော့ဘူး။
ပြီးတော့ ပေါ်ကြေးတို့ အဖွားက ပေါ်ကြေးတို့ အဘိုးအကြောင်း တခုတ်တရပြောထားတာတွေ ရှိသေးသည်။ ပေါ်ကြေးတို့ ရွာက
ဧရာဝတီမြစ်နှင့် တစ်မိုင်လောက်ဝေးသည်။ ၀ါဆိုဝါခေါင် ဧရာဝတီ မြစ်ရေတက်ချိန်ဆိုရင် ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ရွာကြားမှာ ရေပြင်ကြီး
ဖြစ်နေတတ်၏။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းရောက်မှ ဧရာဝတီ မြစ်ရေကပြန်ကျသည်။ ပြီးတော့ ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ပေါ်ကြေးတို့ ရွာကြား ကန်ဇင်းပင်ချောင်းဆိုတာ ရှိသေးသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ဘေးက မြေနုကျွန်းတွေသွားချင်လျှင် ကန်ဇင်းပင်ချောင်းကို ဖြတ်သွားမှရသည်။ ရေကျကာစရက်ဆိုလျှင်နွားကော၊လူကော ရေကူးသွားရသည်။ တစ်ရက်မှာ ပေါ်ကြေးတို့ အဘိုးက မြေနုကျွန်းပေါ်ထယ်ထိုးသွားဖို့ စောစောထနွားစာကျွေးသည်။ နွားတွေဝတော့ တံပိုးတုန်းမှာနွားတွေတပ်ပြီး တံပိုးပေါ်မှာ ထယ်ကိုချိတ်တင်လိုက်၏။ ကန်ဇင်းပင်ချောင်းရိုးရောက်လျှင် ရေကူးရမှာသတိရပြီး ၀တ်ထားသည့်ပုဆိုးကိုချွတ်ပြီး ခေါင်းမှာပေါင်းထားလိုက်သည်။ ခပ်တည်တည်နှင့် နွားတစ်ရှည်းမောင်းပြီး ရွာအနောက်တံခါးကို ထွက်လာသည်။
လင်းအားကြီးအချိန်မို့ ပဲခင်းစပါးခင်း၊ ဆေးခင်းသွားသည့် အမျိုးသမီးတွေနှင့် လမ်းမှာတွေ့သည်။ အမျိုးသမီး တစ်သိုက်က လှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်နှင့် ပြုံးဖြီးဖြီးဖြစ်သွားကြသည်။ ပေါ်ကြေးတို့ အဘိုးက ခပ်တည်တည်ဖြင့် နွားတွေကို ခပ်သွက်သွက်မောင်းသည်။ လူတွေသူ့ကိုကြည့်ပြီး တဟားဟားရယ်နေတာ သတိမထားမိဘူး။ ချောင်းစပ်ရောက်မှ ပုဆိုးချွတ်မလို့ ငုံ့အကြည့် ပါးစပ်က ဟိုက်ခနဲ မြည်သွားသည်။ ခပ်ရှက်ရှက်နှင့် ရေထဲ ဒိုင်ဗင်ထိုးချလိုက်ရသည်။ သူမေ့ တတ်ပုံကလည်း မျက်နှာပူစရာကြီးကိုး။
ပေါ်ကြေးတို့အဘိုးမေ့တတ်သလို ပေါ်ကြေးအဖေလည်း မေ့တတ်သည်။ ပေါ်ကြေးတို့ အဖေနှင့် အမေလက်ထပ်ပြီးကာစက မန္တလေးကို ဘုရားဖူး သွားကြသည်။ တကယ်တန်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ဘုရားဖူးချည့် သက်သက်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ကြက်သွန်လေး ဆယ့်ငါးအိတ်၊ အိတ်နှစ်ဆယ်တင်ပြီး ကြက်သွန်ရောင်းရင်း ဦးဘသန်းတို့ ပွဲရုံတေါမှာ ရောင်းတာကများသည်။ အဲသည်ပွဲရုံတွေက ကြက်သွန်လာရောင်းသူတွေကို အိပ်စရာ နေရာပေးသည်။ ဒါနှင့် ပေါ်ကြေးတို့ အဖေနှင့် အမေ ကြက်သွန်အိတ်တွေ ပွဲရုံမှာ ချထားပြီး မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး သွားဖူးကြသည်။ ကိုင်းတန်းဈေးကိုဖြတ်ပြီး ဈေးချိုဘက် ကိုတက်သည်။ ရှစ်ဆယ့်လေးလမ်းပေါ်ရောက်တော့ ဘုရားကြီး၊ ဘုရားကြီးဆိုတာနှင့် ကားပေါ်တက်ထိုင်လိုက်သည်။ သုံးဆယ့်နှစ်လမ်းရောက်တော့ ခရီးသည် တင်ဖို့ ကးကအငြိမ့်၊ ရွာကဆိုက်ကားနင်းနေသည့် ကလေးတစ်ယောက်တွေ့တာနှင့် အားရ၀မ်းသာ နှုတ်ဆက်ဖို့ ကားပေါ်ကခုန်ဆင်းလိုက်သည်။ လိုင်းကားပေါ်မှာ သူ့ဇနီးပါသွားတာ သတိမရတော့ဘူး။ ရွာကကောင်လေးနှင့် စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့ပြောရင်း ဘုရားဖူးသွားတာ မေ့သွားသည်။ ခပ်တည်တည်နှင့် ပွဲရုံပြန်လာသည်။ ပွဲရုံရောက်ပြီး သူ့ဇနီးမတွေ့တော့မှ ဘုရားဖူးသွားတာ သတိရသွားသည်။ အဲ့သည်တော့မှ ပွဲရုံပိုင်ရှင် အကူအညီတောင်းပြီး ပြန်ရှာရသည်။ သူတော်ကောင်းတွေ ကူညီလို့ သူ့ဇနီးသည်ကို အရှင်လတ်လတ် ပြန်တွေ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ပေါ်ကြေးတို့ အမေဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ပေါ်ကြေးတို့ အဖေနှင့် ခရီးအတူတူသွားဖို့ မပြောတော့ဘူး။
တစ်အိမ်ထဲမှာ အတူတူနေသည့် သားအဖချင်းတောင် လမ်းမှာတွေ့လို့ အဖေ ဘယ်သွားမလို့လဲ မေးရင် ခေါင်းကိုလက်ဖြင့်ကုတ်ပြီး သြ တူပါထယ်ထင်လို့ သေသေချာချာကြည့်နေတာ။ ငါ့သား ပေါ်ကြေးကြီးကိုး။ အမေမင့်ကို မေ့နေတာကွ။ တော်တော်ပြန်စဉ်းစားယူရတယ် ပေါ်ကြေးတို့ အဖေက အဲသလိုကို မေ့တတ်တာ။
"ကိုယ့်ဘ၀ဆိုတာ ကိုယ့်သမိုင်းပဲ မောင်ရ။ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ် ပြန်သတိရရင် မအ
ဆရာတော်က ပေါ်ကြေးနှင့်ကြုံတိုင်း ထိုကဲ့သို့ မကြာခဏ သြ၀ါဒ ခြွေတတ်၏။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း လူ့ဘ၀ကြီးကို ဖြတ်သန်းရင်း နားကျည်းစရာတွေ၊ ကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာတွေ၊ ရွံရှာစက်ဆုပ်စရာတွေကို ပေါ်ကြေးမေ့ပစ်ချင်သည်။ သတိရနေရတာနှင့်စာလျှင် မေ့ပစ်လိုက်တာက ပိုပြီးနေသာထိုင်သာ ရှိမည်ဟု ပေါ်ကြေးထင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ တစ်ကယ်မမေ့ပဲ မေ့ပစ်ချင်ယောင်ဆောင်ရတာတွေ ရှိသည်။ ပေါ်ကြေးရွာမှာ ရှိစဉ်က ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ရည်းစားစကားလိုက်ပြောဖူးသည်။ သိပ်ဝေးဝေးလံလံထဲကတော့ မဟုတ်ဘူး။ ပေါ်ကြေးတို့ ရပ်ကွက်ထဲကပါပဲ။ ရည်းစားစကားပြောပြီး အဖြေတောင်းဖို့ မေ့သွားသည်။ ပေါ်ကြေးတောင်ပေါ်မြို့ကလေးရောက်လာပြီး ရွာကို တစ်ခေါက်တစ်ကျင်းပြန်တော့ အမေက စိတ်လိုလက်ရပြန်ပြောသည်။
"ခက်စိမ်းခင် က နင်သူ့ကို ရည်းစားစကားပြောပြီး အဖြေမတောင်းလို့တဲ့။ အမေ့ကို
ပေါ်ကြေး ထိုကိစ္စကို ရိုးရိုးသားသား အမှန်တကယ်မေ့သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရိုးရိုးသားသားမဟုတ်ပဲ မေ့ချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုတော့ ပေါ်ကြေးဘ၀မှာ ရှိနေခဲ့သည်။ ပေါ်ကြေး ကြီးပွားရာ ကြီးပွားကြောင်းရှာကြံရင်း ရတနာပြေတောင်ပေါ်မြို့ကလေးသို့ ရောက်လာသည်။ ခဲတွင်းလေးဆင်းလိုက်၊ ပွဲစားလုပ်လိုက်၊ ကုန်သည်လေးလုပ်လိုက်နှင့် အချိန်တွေကို စားသုံးပစ်နေသည်။ လူ့ဘ၀ဆိုတာကလည်း ပိန်တစ်ခါ ဖောင်းတစ်လှည့်မို့ အဆင်ပြေတာရှိသလို အဆင်မပြေတာတွေလည်း ရှိသည်။ ထားပါတော့။ "ပြာလဲ့" ကို ပေါ်ကြေး "ဇာမချဲ့" ချင်တော့။
ပေါ်ကြေးထာပွဲသွားရင်း မသန်းသန်းမြင့်နှင့် ရင်းနှီးခင်မင်ခွင့်ရသည်။ မသန်းသန်းမြင့်က အနီတစ်,ကိုက်တွေစပ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ပေါ်ကြေး ပွဲစားဆွဲလာသည့် တစ်,ကိုက် အရည်တက်လေးတွေကို ဈေးပိုပေးပြီးဝယ်တတ်သည်။ အချိန်ရလျှင် ပေါ်ကြေးကို ခေါက်ဆွဲလေးကျွေးပြီး လက်ဖက်ရည်ပါတိုက်တတ်၏။ အစ်မသန်းသန်းမြင့်က အသားဖြူပြီး မျက်နှာလေးက ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်က အနည်းငယ်ဆူဖြိုးသည်။ လမ်းလျှောက်လျှင်လည်း လှုပ်လိလှုပ်လဲ့ ခပ်ယဲ့ယဲ့ရယ်။
ကြိုးချင်းထား ကြိုးချင်းငြိဆိုသလို အထိအတွေ့များလာတော့ မသန်းသန်းမြင့်ကို ပေါ်ကြေးသံယောဇဉ်တွယ်မိသွားသည်။ ပေါ်ကြေးဘ၀မှာ အခြားအမျိုးသမီးတွေနှင့်လည်း အထိအတွေ့ အဆက်အဆံနည်းသည်။ မသန်းသန်းမြင့်၏ ၀ တာလေးကိုပဲ ချစ်စရာလေးဟု ပေါ်ကြေးထင်လာ၏။ မသန်းသန်းမြင့်၏ရူပါရုံက ပိုက်ကွန်တစ်ခုလို ပေါ်ကြေးအားလွှမ်းခြုံလိုက်သည်။ အချစ်ဆိပ်တက်နေတုန်းမှာ ပေါ်ကြေးနှလုံးသားတွေ မူးမိုက်နေ၏။
ပန်းခြံထာပွဲသွားရင်း မသန်းသန်းမြင့်က ပေါ်ကြေး နဂါးရုံဘုရား မရောက်ဖူးဘူးဆိုတာနှင့် ဘုရားကိုလိုက်ပို့သည်။ ဆောင်းလလယ်မှာ ချယ်ရီပန်းတွေက အစွမ်းကုန်ဖူးပွင့်နေသည်။ ငြိမ်းချမ်းတိတ်ဆိတ်သည့် နဂါးရုံဘုရား ရင်ပြင်မှာ ပေါ်ကြေး မသန်းသန်းမြင့်ကို မေတ္တာအကြောင်းတွေပြောပြဖို့ ကြိုးစားလိုက်သည်။
"ချယ်ရီပန်းတွေ သိပ်လှသလို မသန်းသန်းမြင့်လည်း အရမ်းလှတယ်။ ချယ်ရီပန်းလေးတွေ
ချစ်စရာကောင်းသလို အစ်မကလည်း သိပ်ချစ်စရာကောင်းတာပဲ။ အစ်မကိုကျွန်တော် ချစ်တယ်။"
ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်မှာ ငှက်ကလေးတွေ တီတီတာတာ အသံမြည်သွားသည်။ လေညှင်းသွဲ့သွဲ့တိုက်သည်။ မသန်းသန်းမြင့်ပါးပြင် ရဲခနဲ ဖြစ်သွားသည်။
"ဟင်းရွက် ကန်ဇွန်း ကိစ္စမဟုတ်ဘူး မောင်လေးရဲ့ မမ စဉ်းစားပါရစေဦး"
ပေါ်ကြေးက ချယ်ရီပန်းတစ်ခက်ခူးပြီး မသန်းသန်းမြင့် ဆံနွယ်ပေါ် ပန်ဆင်ပေးလိုက်သည်။ နှစ်ယောက်သား ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်ကနေ တိတ်တဆိတ် ပြန်လည်ထွက်ခွါလာခဲ့သည်။ လေပြေလေညှင်းက စကားလုံးတွေ ခိုးဝှက်သွားသည်။
ခဲတွင်းတွေ ပြန်စတော့ ပေါ်ကြေး ခဲတွင်း ပြန်ဆင်းဖြစ်သည်။ နေ့အိပ် ညဆင်းနှင့်ဆိုတော့ ပေါ်ကြေး ဘယ်မှမသွားဖြစ်ဘူး။ မသန်းသန်းမြင့်ကိုတောင် မေ့တေ့တေ့ ဖြစ်သွားသည်။ တစ်ရက် ဂါးဒင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ တွင်းဆရာကိုဝင်းအောင်နှင့် လက်ဖက်ရည်ထိုင်သောက်နေစဉ် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် တလိမ့်လိမ့်ချဉ်းကပ်လာနေသည်။ ဗြုန်းခနဲကြည့်လျှင် ကြော်ငြာသရုပ်ဆောင် ပွင့် လိုလို ဘာလိုလို ထင်မှတ်မှားရသည်။ အသေအချာကြည့်မှ မသန်းသန်းမြင့် ဖြစ်နေသည်။ မတွေ့ရသည့် သုံးလေးလအတွင်းမှာ အစ်မမသန်းသန်းမြင့်က တော်တော်တော်လေးဝသွားရှာသည်။ မသန်းသန်းမြင့်က ပေါ်ကြေးကိုတွေ့ချင်လွန်းလို့ လုပ်ကွက်တွေထဲအထိ လိုက်လာသည်။ ပေါ်ကြေးက နှုတ်ဆက်ပြီး ခေါက်ဆွဲခေါ်ကျွေးသည်။ တွင်းဆရာကိုဝင်းအောင်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးသည်။ မသန်းသန်းမြင့် အပြုံးတွေက ၀င်းလက်နေ၏။ ပေါ်ကြေး မသန်းသန်းမြင့် ကိုယ်ခန္ဓာကြည့်ပြီး ကြက်သီးတွေ ဖျန်းခနဲ ထသွား၏။
"မောင်လေးကို မျှော်နေတာ။ အလုပ်နားတဲ့ရက် လာခဲ့ဦး။ မောင်လေးကြားချင်တဲ့ စကား
ခေါက်ဆွဲစားပြီးတော့ ပေါ်ကြေးကို နှုတ်ဆက်ကာ မသန်းသန်းမြင့် တလှုပ်လှုပ်ထွက်ခွါသွားသည်။မသန်းသန်းမြင့် ဘယ်လောက်ပင်မျှော်နေ မျှော်နေ ပေါ်ကြေး မသန်းသန်းမြင့်ဆီ ဘယ်တော့မှ သွားဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာနေသည်။ ပေါ်ကြေး တကယ်ပဲ မေ့တတ်တာလား။ မေ့ချင်ယောင်ပဲ ဆောင်နေတာလား။ ပေါ်ကြေးပဲအသိဆုံး ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ။
Posted by ထက်နိုင် at 1:00 AM0comments
သတိရလို့ဖုန်းဆက်လိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်ခင်ဗျားကို အရမ်းသတိရတာပဲ။ ခင်ဗျားအကြောင်းလဲ ခဏ ခဏ
စဉ်းစားနေမိတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့က ခင်ဗျားကိုတည်မှီ ပေါက်ဖွားရှင်သန်လာရတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်
၂၀၀၇ က ကျွန်တော့်ရင်ထဲကို ကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာတွေ တော်တော်များများ ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ သမံ
တလင်းပေါ် ဖန်ခွက်ကျကွဲသလို ကျွန်တော့်နှလုံးသားတွေ ကြေမွခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ဆောက်တည်ရာမရ
ခဲ့ဘူး။သည်နှစ်ထဲမှာ ကျွန်တော့်ကျန်းမာရေးက အရမ်းချူခြာတာပဲ။ အနာဂတ်မဲ့နေသလို ခံစားရတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်း
ခပ်ကင်းကင်း နေချင်မိတယ်။ စိတ်ကျဝေဒနာများ ခံစားနေရသလားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စမ်းစစ်နေမိတယ်။ တော်သေးတာပေါ့
နှစ်သစ်မကူးခင်က ဇာတိမြေကို ကျွန်တော်ပြန်ဖြစ်သေးတယ်။ ( ခင်ဗျားဘက်က ကြည့်ရင်တော့ သည်ကိစ္စက တော်တော်ရယ်စရာ
ကောင်းမှာ။ ကမ္ဘာမြေကိုက ကျွန်တော့်ဇာတိပဲမဟုတ်လား။ )။ ထားပါတော့။ ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာက မိဘတွေဆီ ပြန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပါ။
တောသူတောင်သားဆိုတော့ ရွာလွမ်းစိတ်အခံလေးက ရှိသေးတာကိုးဗျ။ နေကလည်း အရမ်းပူတာပါ။ အ၀ါရောင်တွေ အရည်ပျော်ကျမတတ်ပဲ။
သည်နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာ တောင်သူလုပ်ငန်းဝင်ချိန်လေ။ ရွာမှာရှိတဲ့လူ တော်တော်များများက ကြက်သွန်ခင်း၊
ဆေးခင်း နဲ့ မြေပဲခင်းတွေဆီရောက်နေကြတာများပါတယ်။ပြီးတော့ ကျွန်တော်ရွာနဲ့ဝေးခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ရှိပြီ။ သုံးလေးနှစ်နေမှ
တစ်ခေါက်တစ်ကျင်းပဲ ပြန်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့ဘာသာစကားကလည်း အတော်အတန်ခြားနားနေခဲ့တယ်။
ကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်းတွေလည်း မရှိသလောက်ပါပဲ။ သူတို့လည်း သူတို့ရောက်ရာ ဘ၀မှာ ပျော်နေကြတာပါ။
ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ မြေနုကျွန်းတွေဘက် ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ပြောရအုံးမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရွာက ဧရာဝတီမြစ်နဲ့ နှစ်မိုင်လောက်ဝေးတယ်။
ဧရာဝတီမြစ်နဲ့ နှစ်မိုင်လောက်ဝေးတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ရေတတ်ချိန်ဆို ရွာအနောက်ဘက် ကိုင်းပြင်ကြီးတွေဟာ ရေတွေ
ွချည်းပဲ။ လောင်းလှေတွေ တလွှားလွှားသွားခဲ့တာ သတိရမိနေသေးတယ်။ မြေနုကျွန်းဘက်မရောက်ခင် ကန်ဇင်းပင်ရိုးဆိုတာကို ဖြတ်ရသေးတယ်။
ကန်ဇင်းပင်ရိုးရေက လူမမှီလို့ လှေနဲ့ ဖြတ်ရသေးတာ။ ကုတို့ပို့တဲ့ ကလေးလေးက သူစိမ်းတစ်ယောက်လို ကျွန်တော့်ကို ခပ်ငေးငေးကြည့်နေတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ သည်ရွာသားစစ်စစ်တစ်ယောက်ဆိုတာသူမသိရှာဘူး။ ကလေးက ကျွန်တော့်ကို သူစိမ်းတရံစာတစ်ယောက်လို့ပဲ ထင်နေတယ်။
အစ်ကိုကြီး ရေကြောက်တတ်သလားတဲ့။သူက ကျွန်တော့်ကို မေးခွန်းတစ်ခုနဲ့ ချည်နှောင်လိုက်တယ်။ ရေကြောက်တာပေါ့
ကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေဆို ရမကြောက်ဘူး တဲ့။
ခါတိုင်းနှစ်တွေက သီတင်းကျွတ်ရင် ဧရာဝတီမြစ်ရေက ပြန်ကျတာပဲ။ သည်နှစ်တော့ရေထွက်ပေါက် ကန်ဇင်းရိုးပင်ကို ထိပ်ဝကနေ သဲတွေပို့သွားတော့
ရေတွေက မြစ်ထဲပြန်မဆင်းပဲ အီခံနေတယ်။ ဖောက်ထုတ်လို့ကလည်း မရဘူး။ သဲကြမ်းထုကတော်တော်ထူတယ်။ ရေပြန်ကျမှ စိုက်မယ် ပျိုးမယ်လို့ အား
ခဲထားတဲ့တောင်သူတွေလည်း ချွေးပျံနေကြရှာတယ်။ မမျှော်လင့်တဲ့ ရှုဒေါင့်ကနေ သဘာဝတရားရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို အလူးအလဲ ခံလိုက်ရတယ်။
ကုတို့ပို့တဲ့ကလေးကို ချန်ထားရစ်ပြီး မြေနုကျွန်းတွေဘက် ကျွန်တော်ဆက်ထွက်ခဲ့တယ်။
သည်နှစ် ကျွန်တော်တို့ကိုင်းက မြေပဲတွေ တော်တော်ကောင်းတယ်။ အရွက်လေးတွေက ပိုးမွှားကင်းစင်ပြီး စိမ်းလဲ့နေတာ။
အဖေက မြေပဲတွေ တော်တော်ဥတာ နှုတ်ကြည့်ခဲ့ပါလားတဲ့။ ကျွန်တော်ကနှမျှောတာနဲ့ နှုတ်ချိန်မရောက်သေးတဲ့ မြေပဲပင်လေွးေကို နှုတ်မကြည့်ခဲ့ဘူး။
အဖေကတော့ ကိုင်းထဲရောက်တိုင်း မြေပဲတွေ ဘယ်လောက်ဥသလဲလို့ ခဏခဏ နှုတ်ကြည့်တယ်။ ဥအနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး သူ့ကိုင်းကနေ မြေပဲဘယ်လောက်တော့ထွက်မှာလို့ မှန်းတယ်။
အဖေ့မျက်နှာဟာ ပြုံးလဲ့နေတာပဲ။ အဖေက သူ့ဘ၀ကို ၀န်းကြီးချုပ်ရာထူးနဲ့ မလဲနိုင်ပေါင်လို့ ခဏခဏပြောတယ်။ သည်လိုနဲ့ အဖေလည်း အသက်အရွယ်ရင့်ရော်လာပါပြီ။
အဖေကတော့ မြေပဲပင်လေးတွေ နှုတ်ကြည့်နေဆဲပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ မြေနုကိုင်းရဲ့ အလယ်လောက်မှာ ရှားပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်။ပင်စည်လုံးပတ်တင် လူနှစ်ဖက်စာလာက်ရှိနေပြီ။
ကျွန်တော် ရှားပင်အောက်မှာထိုင်ပြီး အရှေ့ဘက်ကို မျက်နှာမူလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရွာကလေးဟာ နေရောင်အောက်မှာ မှိုင်းပျပျဖြစ်နေတယ်။ နေံလည်နေရဲ့ အပူရှိန်ကြောင့် တံလျှပ်တွေ ထနေတယ်။
အစိမ်းရောင် ကတ္တီပါစကြီးဟာ ရွာနဲ့ တစ်ဆက်တည်းပဲ။ မြေပဲခင်းကို ကြည့်လိုက်၊ ရွာကို ငေးလိုက်နဲ့ စိတ်တေါက တောင်ရောက် မြောက်ရောက်ပါး ပုဂံခေတ်လောက်
ကတည်းက လူတွေအခြေတကျနေထိုင်ပြီး မွေးဖွားလိုက်သေဆုံးလိုက်နဲ့ အခုအခြေအနေတိုင်တဲ့ အထိဆိုပါတော့။ ဘာမှလည်း ထူးထူးခြားခြား မပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူး။ လူတွေလိုပဲ မန်ကျည်းပင်နဲ့ တမာပင်တွေဟာလည်း
ရှင်သန်လိုက်၊ ဓါတ်မြေသြဇာဖြစ်လိုက်နဲ့ပါ။ ကျွန်တော့် အဘိုးအဖွါးတွေက မေ့ပစ်ကြမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီလိုပါပဲ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ မိတ်ဆွေကြီး။ အချိန်တန်ရင် ကျွန်တော်လည်း ဒီလောကကြီးက ထွက်ခွါသွားရဦးမှာပါ။
ဆောင်းနံနက်ခင်းမှာ နှင်းတွေဝေပြီး ချယ်ရီတွေ မှန်မှန်ဖူးပွင့်ရဲ့လား။ မိုးလေ၀သမှန်ကန်ပြီး ကောက်ပဲသီးနှံတွေ ဖြစ်ထွန်းရဲ့လား။ ငှက်ကလေးတွေ နေရောင်ခြည်မှန်မှန်ရရဲ့လား။ ကလေးတွေ ရှုရှိုက်ဖို့ လေကောင်းလေသန့်ရှိရဲ့လား။
ခင်ဗျားရင်ခွင် ဟောင်းလောင်းဖြစ်နေတာ ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူး။
ဘနာဇီယာဘူတို ကို သူတို့လုပ်ကြံလိုက်ကြပြီ။ သူယုံကြည်ရာသူလုပ်တာ အပြစ်လား။
ကမ္ဘာကြီးကို အပိုင်းပိုင်းလုပ်ပြီး သူပိုင်တယ်၊ ငါပိုင်တယ် ငြင်းခုံနေကြတာ။
ခင်ဗျားကတော့ လူတွေကို ကြည့်ပြီး ပြုံးနေမလားပဲ။
လူတွေ မကောင်းဘူး မိတ်ဆွေကြီး။
ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကြီးနဲ့ အနာဂတ်ပျောက်ဆုံးနေကြတယ်။ လူဆိုတာ အရိပ်နေနေ အခက်ချိုးချိုးရယ်။
လူတွေ မကောင်းဘူး မိတ်ဆွေကြီး။ နူကလီးယားဗုံးတွေ အပြိုင်အဆိုင် ထုတ်နေကြတယ်။
အမုန်းတွေ၊ နာကျဉ်းမှုတွေ၊ အတ္တတွေကြောင့် နူကလီးယား စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်ခဲ့ရင် . . .။
စိတ်မကောင်းဘူး မိတ်ဆွေကြီး။ သတိရလို့ ဖုန်းဆက်လိုက်တာပါ။ ။
Posted by ထက်နိုင် at 12:47 AM 1 comments
မနေ့က ကဗျာရေးဖို့ကြိုးစားရင်း သူနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်။ ည ဆယ့်တစ်နာရီ ကျော်တော့ မိုးတွေ သည်းသည်းမည်းမည်း ရွာချသည်။ သည်နှစ် အပူလွန်မယ်ပြောခဲ့ပေမယ် မုန်တိုင်းတစ်ခုကြောင့် မိုးဦးစောပြီး အပူနည်းခဲ့သည်။ စံချိန်တင် မိုးရေချိန်ကြောင့် မြို့တော်မှာ ရေတွေလွှမ်းခဲ့ကြောင်း ဂျာနယ်တွေမှာ မြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရသည်။ ရာသီဥတုများ၏ အစိုးမရသော သဘောကို သူဆင်ခြင်နေမိသည်။ တချို့ညတွေမှာ ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းတွေ စဉ်းစားရင်း ညဆယ့်နှစ်နာရီကျော်မှ သူ အိပ်ပျော်တတ်သည်။
သူစာအုပ်ဆိုင်ကပြန်ပြီး အိမ်ရောက်တော့ ညကိုးနာရီ ပိုပိုစွန်းနေပြီ။ နှစ်နှစ်ကျော်ကျော် သူ့သမီးလေးက မအိပ်သေးဘဲ အိမ်ရှေ့ထွက်ထိုင်ကာ မိဘနှစ်ပါးကို မျှော်နေတတ်သည်။ သမီးလေးကို ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဆိုင်ကယ်တစ်ပတ် သူပတ်စီးပေးရသည်။ တခြားမိသားစုဝင်တွေ တီဗီရှေ့မှာ ကိုးရီးယားကား ထိုင်ငေးနေစဉ် သူက သမီးလေးအတွက် အချိန်ပေးရသည်။ သမီးလေး မအိပ်မချင်း ပုံပြင်တွေ ပြောပေးရသည်။ သမီးလေးကြိုက်တတ်သည့် သီချင်းကို ထပ်တလဲလဲ ဆိုပြီး ချော့သိပ်ရသည်။ သမီးလေး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြို့် အိပ်ပျော်သွားမှ သူစာရေးစားပွဲမှာ ၀င်ထိုင်သည်။ စာရေးဖြစ်သည်ဖြစ်စေ စာမရေးဖြစ်သည်ဖြစ်စေ စာရေးစားပွဲကိုတော့ ညစဉ်မှန်မှန် ထိုင်ဖြစ်သည်။ စာမရေးဖြစ်သည့် ညတွေမာသူ စာတွေထိုင်ဖတ်သည်။ နေ့ခင်းက မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ ပြောခဲ့သည့် ဟာသအတိုအထွာလေးများကို မှတ်စုစာအုပ်မှာ ပြန်ရေးထားသည်။ သူက လစဉ်ထုတ် ဟာသမဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ဟာသ၀တ္ထုတိုတွေ ပင်တိုင်ရေးပေးနေရသူဆိုတော့ သူ့အတွက် ဟာသအတိုအထွာလေးများကို ဇာတ်အိမ်ဆင်ပြီး ၀တ္ထုတိုတစ်ပုဒ် ပြန်ရေးရသည်။ သူက ဟာသနှင့်အလှမ်းဝေးသူ ဖြစ်ပေမဲ့ သူ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများကတော့ ဟာသဓါတ်ကြွယ်ဝလှသည်။ သူငယ်ချင်းများ၏ ဟာသဓါတ်ခံကို ၀တ်မှုံကူးပြီး သူ ဟာသစာရေးဆရာတစ်ပိုင်း ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့ဘ၀မှာ မှတ်မှတ်ရရ ကဗျာတစ်ပုဒ် ပုံနှိပ်ဖော်ပြခံရဖူးသည်။ သူ ကဗျာတွေကို ချစ်သည်။ ကဗျာဆရာတွေကိုလည်း လေးစားသည်။ သူချစ်သည့် ကဗျာဆရာတွေ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အများကြီး ရှိသည်။ သူ၏ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခံသည့် ကဗျာခေါင်းစဉ်က ‘ရပ်နားခြင်း´ဖြစ်သည်။ ‘ရပ်နားခြင်း´ကဗျာစာမူ မဂ္ဂဇင်းမှာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခံရပြီးကတည်းက မဂ္ဂဇင်းတွေကို သူကဗျာမပို့တော့ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်၏။ မဂ္ဂဇင်းတွေ ကဗျာမပို့ဖြစ်တော့ပေမဲ့ ကဗျာတွေ ပြန်ဖတ်နေတတ်သည်။ ကဗျာတွေ ဖတ်နေရလျှင် သူ့စိတ်အစဉ်မှ သောကမြူမှုန်တွေ ကင်းစင်နေတတ်၏။
သူရေးလက်စကဗျာကို တစ်ပိုင်းတစ်စဖြင့် ရပ်နားလိုက်ရသည်။ သူလိုချင်သည့် စကားလုံးတစ်လုံးကို ခေါင်းထဲမှ နှိုက်ထုတ်မရဖြစ်နေသည်။ ကဗျာက ရှေ့ဆက်မသွားတော့ဘဲ သူ့အလိုလို ရပ်သွားသည်။ သူ့စာရေးစာပွဲမှာ အဆုံးသတ်မရသည့် ကဗျာတွေ တစ်ပိုင်းတစ် ကဗျာတွေ ပျံဝဲနေသည်။ သူခေါင်းတွေ ပူသွားတာနှင့် စာရေးစားပွဲမှာ ဆက်မထိုင်တော့ဘဲ အိပ်ယာထဲ ၀င်လာခဲ့သည်။
တိုင်ကပ်နာရီက တစ်ဆယ့်နှစ်နာရီထိုးကြောင်း သတိပေးနေသည်။ အိပ်ယာထဲတွင် ဇနီးနှင့် သမီးငယ်က နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေသည်။ သူဂွမ်းကပ်စောင်ကို အပေါ်ဆွဲတင်ပြီး အိပ်ပျော်ဖို့ ကြိုးစားသည်။ သူငယ်စဉ်က ဖတ်မှတ်ခဲ့ဖူးသည့် စာတွေပေတွေထဲမှ ဇနီးဝတ္တရားငါးပါးကို သတိရပြီး ပြုံးမိသေးသည်။ သူ့ဇနီးကတော့ သူ့အရင် အိပ်ယာဝင်ပြီး အိပ်ပျော်ခဲ့တာများသည်။ ဇနီးသည်ခမျာလည်း ဆိုင်ကူရ၊ အိမ်ဗာဟီရကိစများအတွက် သူမကို အပြစ်မပြောသာ။
လစဉ်ထုတ်မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်မှာ သူ့စာမူပါလာသည့် နေ့မျိုးဆိုလျှင်တော့ သူ့ဇနီးသည်က သူ့ကိုမျက်စောင်းတခဲခဲ ရှိနေတတ်သည်။ သူကလည်း မန္တလေးက၀င်လာသည့် စာအုပ်ထုပ်ကိုဖောက်ပြီး မဂ္ဂဇင်းမာတိကာတွေကို အငမ်းမရ လှန်လှောရှာသည်။ သူ့စာမူတွေ့လျှင် မျက်လုံးမှ မဂ္ဂဇင်းမှ မခွာတော့။ တစ်ခြားလုပ်ရမည့် အလုပ်ကိစတွေကိုလည်း မေ့သွားသည်။ ကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့သည့် စာမူဖြစ်ပေမဲ့ ပုံနှိပ်စာလုံးဘ၀မှာ ဘာတွေများ မေ့ကျန်ခဲ့လေမဲဟု ပြန်စစ်သည်။ စာစီ အကျအပေါက် အမှားတွေကို ရှာသည်။ သရုပ်ဖော်ပန်းချီဆရာ၏ သူ့ဝတ္ထုတိုလေးအပေါ်ကနေ သူ့မျက်လုံးတွေကို တော်တော်နှင့်မခွါဖြစ်။ အချိန်သိပ်ကြာသွားလျှင်`အခေါက်ခေါက်အခါခါ တစ်ရာရှိပါပြီ´ဟု ဇနီးသည်က သတိပေးတတ်သည်။
တစ်နေ့ကတော့ ၀တ္ထုတိုတွေပါသည့် မဂ္ဂဇင်းငါးအုပ်ကို သူအိမ်မှ သယ်ယူသွားပြီး မိတ်ဆွေပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ထံ အရောင်တွေထည့်ခိုင်းသည်။ သရုပ်ဖော်ပုံမှာ လေးရောင်ထည့်ထားသည့် သူ့ဝတ္ထုတိုလေးများကို သူ တစိမ့်စိမ့်ကြည့်သည်။ ၀တ္ထုတိုလေးများက အရောင်တောက်တောက်များဖြင့် ကြွတက်နေသည်။ ဇနီးသည်က စာအုပ်စာရင်းတွေလုပ်ရင်း သူ့နားတိုးကပ်လာသည်။
`ရှင် ရှင်ဝတ္ထုတိုတွေကို အဲသလောက်ချစ်နေရင် ကျွန်မကို ဘာလို့ယူခဲ့လဲ။ အဲသည် ၀တ္ထုတိုတွေနဲ့ပဲ နေပေါ့။ ကျွန်မကလည်း ရှင်အဲသည် ၀တ္ထုတိုတွေကို ခုလိုချစ်မှန်းမသိလို့ ရှင့်ကို ယူခဲ့မိတာ´
သူ ဇနီးသည်ကို ဘာမှ ပြန်မပြောသာဘဲ ဆိတ်ဆိတ်နေလိုက်ရသည်။ သူ သူ့ဇနီးကို ချစ်မြတ်နိုးလို့ လပ်ထပ်ခဲ့တာ မှန်ပေမဲ့ သူ့ဝတ္ထုတိုလေးများကိုလည်း သူမြတ်နိုးပါသည်။ သူ အိပ်ပျော်ဖို့ ကြိုးစားရင်း ဇနီးသည်၏ စကားပြန်လည် ကြားယောင်နေသည်။
လေပြင်းတစ်ချက်နှစ်ချက် ဆောင့်ဝင်ပြီး ထောပတ်ရွက်တွေ တဗြောဗြော အသံမြည်သွားသည်။ ခဏနေတော့ မိုးကသည်းသည်း မည်းမည်းအငြိုးတကြီး ရွာချသည်။ မိုးပြင်းသံတွေ လွှမ်းခြုံရင်း သူနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကြီး အိပ်ပျော်သွားတော့သည်။ သူနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်စက်လိုက်ရ အိပ်ယာမှနိုးတော့ လန်းဆန်းဖျတ်လတ်နေသည်။ စိတ်ထဲမှာ အကြည်ဓါတ်လေး ကိန်းအောင်းနေ၏။ ဘုရားစင်ရှေ့ သူ ၀ပ်ဆင်းလိုက်သည်။ သူသည် ဗုဒဘာသာ မြန်မာစစ်စစ် တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူ ဘုရားကို ယုံကြည်သည်။ တရားကို ယုံကြည်သည်။ သံဃာကို ယုံကြည်သည်။ ဒါပေမဲ့ အခုလို ကြည်ကြည်နူးနူး ကျေကျေနပ်နပ် ဘုရားစင်ရှေ့မှာ မထိုင်ဖြစ်ခဲ့တာ နှစ်အတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေနှင့် သည်ဘုရားစင်လေးကို မညစ်နွမ်းစေချင် ဖြစ်သည်။
ဘုရားစင်နှင့်ကပ်လျှက် ယှဉ်တွဲချိတ်ထားသည့် ပဋိစ သမုပါဒ် စက်ဝိုင်းကြီးကို သူငေးကြည့်နေဖြစ်သည်။ ဘ၀၏ ဖြစ်တည်မှုကိုသာမက ဖြစ်တည်မှု၏ လာရာအတိတ်နှင့်လားရာ အနာဂတ်ကိုပါ ရှင်းပြထားသော သံသရာစက်ဝန်းဖြစ်သည်။ စက်ဝန်းကို ငေးရင်း သူဘ၀ကို ဆင်ခြင်နေမိသည်။ ဘ၀ကို ဆင်ခြင်ရင်း ပရမတ္တသစာ (A) နှင့် သမုတိသစာ (R) တို့ဆီ အတွေးကရောက်သွားပြန်သည်။ ထိုခဏငယ်အတွင်းမှာပင် အလုပ်ကိစတွေ ခေါင်းထဲပြန်ဝင်လာပြီး စိတ်တွေ ပြန်လည်နောက်ကျိသွားပြန်သည်။
သူ ဘုရားစင်ရှေ့မှ ထသည်။ မျက်နှာ ကပျာကယာသစ်သည်။ သွား ကပျာကယာတိုက်သည်။ ထမင်းကြော်ကို မြန်မြန်စားသည်။ အိပ်ကနေ ခပ်သွက်သွက် လှမ်းထွက်လိုက်၏။ မနေ့ညက F ဂျာနယ်တွေ မန္တလေးကနေ ရောက်လာရာမှာ ရောက်မလာဘူး။ အိမ်ကနေ စောစောထွက်ပြီး အောင်ရတနာကားဂိတ် ၀င်မေးရမည်။ အအိပ်မက်သည့် ကားဆရာနှင့်တွေ့လျှင် ဂျာနယ်တွေ နေမြင့်မှ လာချလျှင် ခက်မည်။ ညကားနှင့် ဂိတ်မှာ ဂျာနယ်တွေ ရောက်မနေလျှင် မန္တလေးဂိတ်မှူး ဦးမျိုးဆီ ဘယ်ကားနံပါတ်နှင့် ထည့်ပေးလိုက်သလဲ ဖုန်းဆက်မေးရမည်။ သူ ဂိတ်ကို ၀င်မေး၏။ ဂိတ်မှာ ဂျာနယ်တွေ ရောက်မနေတော့ တစ်ဆက်တည်း `ရှိုင်း´မှ ဦးပြုံးဆီ သွားပြီး မန္တလေးကို ဖုန်းဆက်သည်။
`ဂျာနယ်ထုပ်တွေ တင်ထားတဲ့ ကား မနေ့နေ့လည်က လူမပြည့်လို့ မထွက်နိုင်ဘူး´
သူ သက်ပြင်းမောကို ဟူးခနဲ မှုထုတ်လိုက်သည်။ ဂိတ်မှူးတွေမှာလည်း ဆိုင်ရာဆိုင်ရား ကားသမားလေးတွေ ရှိသည်။ လူနိုင်တွေရှိသည်။ ကိုယ့်ကား အလှည့်မကျသေးလို့ မထွက်နိုင်သေးပေမဲ့ ပစည်းထုပ်၊ တန်ဆာထုပ်တွေ အတင်းယူတင်ထားလိုက်တာမျိုး ရှိသည်။ တခြားစာအုပ်ထုတ်တွေမှာ ဘယ်အချိန်ရောက်ရောက် ပြ နာမရှိပေမဲ့ ဂျာနယ်ကျတော့ နှစ်နာရီ သုံးနာရီတောင် အတိမ်းအစောင်းခံတာမဟုတ်။ အားကစားဂျာနယ်ဆိုလျှင် ပိုဆိုးသေးသည်။ ဘောလုံးပွဲတွေ ကန်ပြီးမှ ဂျာနယ်ထုပ်ရောက်လာလျှင် ဂျာနယ်ပုံကြီး ငေးကြည့်နေရုံ၊ ဂျာနယ်အလုပ်သဘောကို ကားသမားတွေ နားလည်စာနာလျှင် ကောင်းမည်ဟု သူတွေးနေမိသည်။ ဂိတ်မှူးကတော့ သူ့အခက်အခဲတွေ ပြောပြတိုင်း `ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာ၊ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ´ဟု ခေါင်းငြိမ့်နေတာက များသည်။
သူဆိုင်ပြန်လာပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ၀င်ထိုင်သည်။ ကော်ဖီခါးခါးတစ်ခွက်မှာသောက်သည်။ အားကစားဂျာနယ် ၀ယ်နေကျ ဖောက်သည်တွေက ဂျာနယ် မရောက်သေးဘူးလား၊ မရောက်သေးဘူးလားနှင့် တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် လာမေးသည်။ သူက ဂျာနယ်မရောက်သေးကြောင်းနှင့် ဘာကြောင့် ဂျာနယ်တွေ အရောက်နောက်ကျရကြောင်း တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် သဘောပေါက်အောင် ရှင်းပြနေရသည်။ ရှင်းပြရင်း ရှင်းပြရင်း တဖြည်းဖြည်း သူ့ပါးစပ်ထဲမှ စကားလုံးတွေ လေးလံလာသည်။ စကားလုံးတွေ သွက်သွက်လက်လက် ထွက်ကျလာဖို့ အခက်အခဲဖြစ်လာသည်။
သည်နှစ် ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီမှာ မန်ယူဗိုလ်စွဲဖို့ သေချာသလောက် ဖြစ်သွားပြီ။ ချယ်ဆီး၏ သုံးနှစ်ဆက်တိုက် ဖလားရဖို့အရေးကို မန်ယူက ခြေဖျက်လိုက်နိုင်သည်။ သူတို့ မြို့ကလေးမှာ မန်ယူပရိသတ်တွေကများသည်။ မန်ယူဂိုးသွင်းလိုက်တာနဲ့ ဘောလုံးပွဲရုံ၏ အမိုးတွေ ပွင့်ထွက်သွားမတတ် အော်ဟစ်အားပေးကြသည်။ မန်ယူရှုံးသည့်နေ့မျိုးဆိုလျှင်တော့ တစ်မြို့လုံး ငြိမ်ကျသွားတတ်၏။ ချယ်ဆီးမန်နေဂျာ မော်ရင်ဟိုကုယိ သူသဘောကျပေမဲ့ မန်ယူကိုတော့ နိုင်စေချင်သည်။ မန်ယူနိုင်သည့် နေ့မျိုးဆိုလျှင် သူ့ဆိုင်က အားကစားဂျာနယ်တွေ ပြိုက်ခနဲ ကုန်သွားတတ်သည်။ အင်္ဂလန်ကျွန်းမှာ ရှိနေသည့် မန်ယူနှင့် သူ့စီးပွားရေးက တိုက်ရိုက် အချိုးကျနေတတ်သည်။ ဘာမှမဆိုင်ဘူဟု ထင်ရပေမဲ့ မန်ယူနိုင်မှ ဖြစ်မှာဟု သူတွေးနေဖြစ်သည်။
ခဏနေတော့ သူ လက်ဖက်ရည်သောက်နေသည့် ဘေးသို့ သိစိတ်ချို့ယွင်းနေသည့် လူငယ်တစ်ယောက် ရောက်လာသည်။ လူငယ်ဆိုပေမဲ့ အသက်သုံးဆယ်ငါးနှစ်လောက်တော့ ရှိမည်ထင်သည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်လေးက ဗိုက်ကို ပုတ်ပြပြီး အီကြာကွေးတစ်ချောင်း လှမ်းတောင်းသည်။ ခါတိုင်းနေ့တွေမှာလည်း တောင်းတိုင်းပေးနေကျဆိုတော့ ထိုပုဂ္ဂိုလ်လေး၏ မျက်ဝန်းတွေက သေချာရဲဝံ့နေသည်။
သူခပ်တင်းတင်း လက်ခါပြလိုက်သည်။ သိစိတ်ပုံမှန် မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ ခဏငိုင်သွားသည်။ ပြီးမှ `ခင်ဗျားဆိုင် သည်လောက်ရောက်ကောင်း နေတာဗျာ၊ ပြီးတော့ ခင်ဗျားပဲ ပြောပြောနေသေး။ So ဆို´
သူစိတ်တိုရအခက်၊ ရယ်ရအခက် ဖြစ်သွားသည်။ ဘေးနားစားပွဲကလူတွေ ခပ်ပြုံးပြုံး ဖြစ်သွားသည်။ သူ အီကြာကွေး တစ်ချောင်း ယူပေးလိုက်သည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်လေးက အီကြာကွေးကိုင်ပြီး စိုက်စိုက် စိုက်စိုက် ထွက်ခွာသွားသည်။ လမ်းချိုးအကွေ့ ရပ်၊ ကြည့်၊ သွား ဆိုင်းဘုတ်နားရောက်တော့ ခြေထောက်ကို စုံရပ်သည်။ ဘေးဘယ်ညာ ကြည့်သည်။ ဆက်လျှောက်သည်။ လမ်းမပေါ်တွင် ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေ ရပ်တန့်သွားသည်။ လမ်းပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်ပြီ။ ဟွန်းသံတွေ တတီတီ မြည်သွားသည်။ အောင်ရတနာဂိတ်မှူး ဦးရဲက သူတို့နှစ်ယောက်ကို ခွဲထုတ်ပေးလိုက်ရသည်။
သူလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ကျောခိုင်းကာ ဆိုင်ထဲပြန်ဝင်လာခဲ့သည်။ စာအုပ်တွေကို နေသားတကျ ပြန်စီသည်။ ဂျာနယ်တွေ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ထပ်သည်။ ကွာစိခွံတွေ၊ ပလပ်စတစ်အိပ်တွေကို လှဲထုတ်သည်။ နံရံပေါ်မှ စာအုပ်တွေကို ဖုန်သုတ်ပေးသည်။ နံရံကပ်စင်ပေါ်မှာ စာအုပ်တွေ လျော့နေလျှင် ကောင်တာထဲမှ ယူထုတ်ပြီး ပြန်ဖြည့်သည်။ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ ပြီးသွားလျှင် အားကစားဂျာနယ်တွေ လျော့ရမည်။ ပြည်တွင်းသတင်းဂျာနယ်နှင့် နိုင်ငံတကာ သတင်းဂျာနယ်တွေ ပိုမှာရမည်။
wtc ကို လေယာဉ်နှင့် ၀င်တိုက်တုန်းကတော့ သူ့ဆိုင်မှာ နိုင်ငံတကာ သတင်းဂျာနယ်တွေ တော်တော် လေး ရောင်းလိုက်ရသည်။ အခုတော့ အိုစမာဘင်ဘာဒင်လည်း ငြိမ်သက်သွားပြီ။ မြောက်ကိုရီးယားက ဂျပုလေးကလည်း သိပ်မလှုပ်တော့။ အီရန်သမတ အာမက်ဒင်နီဂျက်ကလည်း ငြိမ်သွားပြန်ပြီ။ ကမ္ဘာ့အရေးကလည်း ခပ်အေးအေးဖြစ်နေပြီ။
စာအုပ်တွေစီပြီး ဖုန်ခါရင်း ဒေါက်တာသိန်းလွင်၏ `ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ဘ၀အောင်မြင်ရေး´စာအုပ်ကလေး ငေးဖြစ်သည်။ သည်စာအုပ်ကလေး သူ့ဆိုင်ရောက်နေတာ လေးနှစ်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဈေးနှုန်းလည်း သိပ်ကြီးမြင့်နေတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ စာအုပ်လေးက ရောင်းမထွက်။ ဟာသ၊ ဗေဒင်နှင့် တခြားယတြာစာအုပ်တွေသာ ကုန်သွားသည်။ သည်စာအုပ်ကလေးကတော့ သခင်ချစ်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ လူတွေကလည်း ကိုယ်ကျင့်တရားစာအုပ် ဆိုတာကြီးကို ၀ယ်ရကောင်းမှန်း မသိတော့ဘူးလား။ စိတ်များ မ၀င်စားတော့ဘူးလား။ သူ တောင်တွေး မြောက်တွေးလုပ်ရင်း စိတ်တွေ လွင့်သွားသည်။
`ဟယ်လို … မင်္ဂလာပါ´
သူ နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော ဆိုခရေးတီး ဖြစ်နေသည်။ နာမည်အရင်းကတော့ ဆိုခရေးတီး မဟုတ်ပါဘူး။ စီပူးပါ။ မှုတ်ဆိတ်ရှည်ရှည်တွေ မရိတ်ဘဲထားလျှင် ဆိုခရေးတီးနှင့် တူသဖြင့် သူက စီပူးကို ဆိုခရေးတီးဟု ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သည်မြို့ကလေး၏ လက်ဆယ်ချောင်း မပြည့်သော မိတ်ဆွေစာရင်းတွင် ဆိုခရေးတီးလည်း ပါသည်။ ဆိုခရေးတီးဆိုတာ ခပ်ဂေါက်ဂေါက် ဆိုသည့်အမျိုးအစားထဲမှ ဖြစ်သည်။ မကြာခဏ သူလေ့လာနေသည့် ဂီတအကြောင်းတွေ လာလာရင်ဖွင့်တတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ သူကြိုက်နေသည့် ခပ်ချောချော အမျိုးသမီးအကြောင်းတွေလည်း လာလာပြောတတ်သည်။ တယ်လီပသီနည်းနှင့် စိတ်ချင်း ဆက်သွယ်လို့ရအောင် သူကြိုးစားနေကြောင်း။ သူမ မေတ္တာတွေ ပို့လွှတ်နေသည့် အကြောင်းတွေလည်း ပါသည်။
`ကျွန်တော် ဂီတကို လေ့လာနေတာ ငါးနှစ်ရှိသွားပြီ။ ငါးနှစ်တင်းတင်းပြည့်တဲ့ အချိန်မှာ ဂီတရဲ့ သဘာဝကို ကျွန်တော် ရိပ်စားမိခဲ့သည်။
ဆိုခရေးတီးက ခံစားချက် အပြည့်ဖြင့် ဆက်ပြောသည်။
`ဂီတမှာ တိုင်ပင်တွေ ပါတယ်။ ရုပ်ဝတ္ထုပစည်းတွေ အားလုံးဟာ တိုင်ပင်တွေနဲ့ ရွေ့လျားနေကြတာ။ အဲဒီတော့ လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာ ဂီတပဲပေါ့ဗျာ။ ရထားမြည်သံဟာလည်း ဂီတပဲ။ ဆိုင်ကယ်စက်သံဟာလည်း ဂီတပဲ။ အနည်းဆုံး ဟိုဘက်အခန်းက စက်ချုပ်ဆရာရဲ့ တူထုသံဟာလည်း ဂီတပဲပေါ့။ ဟောဟိုမှာ ဂီတလာနေပြီ။
ဆိုခရေးတီးမျက်လုံးတွေက တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ထံ ရွေ့သွားပြီဖြစ်သည်။ သည်ဂီတကတော့ ရင်ဖိုစရာကောင်းသည်။ ဆိုခရေးတီး အကြည့်တွေက သူ့ဆိပ်ကမ်းကို ပြန်ကပ်သည်။ ဆိုခရေးတီးက နှုတ်နည်းနေသည့် သူ့ကို စေ့စေ့ကြည့်၏။
`ခင်ဗျား သိပ်လေးနက်နေပါလား။ သိပ်လေးနက်မနေနဲ့။ ဆေးတွေဘာတွေ စားနေရမယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးတွေး၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေပါ။ ဘ၀ဆိုတာ ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင်ပဲ။ အချိန်တန်ရင် ကုန်သွားလိမ့်မယ်။ အဲသလို ခပ်တည်တည်ကြီး လုပ်နေရင် ခင်ဗျားရဲ့ မျက်လုံးနှစ်လုံးကို ဟောသလိုလို ထိုးဖောက်ပစ်လိုက်မယ်။´
ဆိုခရေးတီးက `ငါလာပြီ ဟေ့´ဆိုပြီး ဟန်နှင့်ပန်နှင့် လုပ်ပြတော့ သူတို့နှစ်ယောက် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး ရယ်မောပစ်လိုက်သည်။ ဆိုခရေးတီးက ကောလိပ်ဂျင်နေ၀င်း သားအကြီးကောင်ဆိုက်တွေ ဖမ်းပြနေသေးသည်။ လက်တွေ ခြေထောက်တွေ ဟိုယမ်းသည်ယမ်းနှင့်။
`မမကြီး အိမ်ရှေ့မသွားဘူးလား´ သူ အစဖော်ပေးလိုက်သည်။
`မမကြီး သိပ်ရက်စက်တယ်ဗျာ သိလား။ ဟိုတစ်နေ့က သူ့အိမ်ရှေ့သွားထိုင်တာ၊ မှောင်ရိပ်ခိုမှုနဲ့ ရဲစခန်းသွားတိုင်တယ်။ ကျွန်တော် ရေရေလည်လည် ကြွေသွားတယ်။´
ဆိုခရေးတီးက သူ့ကို ခိုတစ်ကောင်လို ငြီးပြနေသည်။
`သွားစမ်းပါ။ ခင်ဗျားပဲ မမကြီးအတွက်ဆို ဓူဝံကြယ်ခူးပေးမယ်လေး ဘာလေးနဲ့။ ရဲစခန်းမှာ တစ်ညလေး အိပ်ရတာနဲ့များ´
´ခင်ဗျားတို့ အဘိုးကြီးတွေ သိပ်ခက်တာပဲ။ အဲဒါ လင်္ကာဗျာ။ အလင်္ကာ သိရဲ့လား။ မိန်းမချောချောလေးတွေကို အလင်္ကာနဲ့ ခြွေရတယ်။ ကျွန်တော်က ရုပ်ကြမ်းပေမဲ့ အသည်းနှလုံးက သိပ်နုတာ။
သူအလုပ်များချင်ယောင်ဆောင်လိုက်တာနှင့် ဆိုခရေးတီးက လက်ပြနှုတ်ဆက် ကမ်းမှခွာသွားသည်။
သူ ငှါးဆိုင်တွေက ၀ယ်သွားသည့် စာအုပ်စာရင်းတွေ လုပ်နေစဉ် မန္တလေးက ဖုန်းဝင်လာသည်။ ဦးပြုံးလာပေးသည့် ဖုန်းကိုယူပြီး သူနားထောင်လိုက်သည်။ တစ်ဖက်က ပြောစကားတွေ နားထောင်ပြီး သူ့ပါးစပ်မှ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့တွေ မိုးမွန်သွားသည်။
´ငွေလိုတယ် ဟုတ်လား။ ကျွန်တော်နှင့် ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လုံးလုံး အစ်မတို့ ငွေလိုနေခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား´ သူ အဲသလိုပြောတော့ သူ့အစ်မ မသဇင်က ရယ်သည်။ ရှိတာလေး အခု စုလွှဲပေးလိုက်မယ် ပြောပြီး သူ ဖုန်းချလိုက်သည်။
သူ စုထားသည့် ပိုက်ဆံတွေ ယူပြီး ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ကြီး တစ်ခုဆီ ထွက်လာခဲ့သည်။ သူ သိပ်မပျော်မရွှင် ဖြစ်နေသည် သူ့မှာ ပေးစရာ ငွေကြေးတွေ ရှိနေခဲ့သည်။ ငွေကြေးနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် သူမပျော်မရွှင်နိုင်ခဲ့တာ ကြာပြီဖြစ်သည်။ သူ အဆင်မပြေမှုတွေကို ဘောလုံးတစ်လုံးလုပ်ပြီး ကန်ထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ သူ့အကြည့်တွေက ထီဆိုင်ကြီးတစ်ခုဆိ ရောက်သွားသည်။ ရည်ရွယ်မထားပါပဲ သူ့ခြေလှမ်းတွေက ထီဆိုင်ဆီ တိုးဝှေ့သည်။ သူ ထီ ဆယ်စောင်တွဲတစ်တွဲ ဖြုတ်ယူလိုက်သည်။ ငွေနှစ်ထောင်နှင့် တစ်လစာမျှော်လင့်ချက်တွေ ၀ယ်ယူလိုက်သည်။ သူ့လို အခြေခံ လူတန်းစားတစ်ယောက်အတွက် ကံတရားလိုသည်။ မျှော်လင့်ချက်လိုသည်။ သိန်းငါးရာဆိုတဲ့ ငွေကြေးဟာ နည်းတာမဟုတ်ဘူး။ သိန်းငါးရာထီသာ ပေါက်ခဲ့လျှင် ငွေလိုနေတယ်ဟု ခဏခဏ ပြောသည့် သူ့အစ်မ မသဇင်၏ပါးစပ်ကို သိန်းနှစ်ရာလောက်နှင့် ပိတ်ပစ်ရမည်။ ပြီးတော့ ပိုက်ဆံမရှိဘဲ မဂ္ဂဇင်း ထုတ်ချင်သည့် မန္တလေးမှ ကဗျာဆရာ ကိုဆံရှည်ကို သိန်းတစ်ရာလောက် ပေးပစ်လိုက်မည်ဟု စိတ်ကူးသည်။ လူရာမ၀င်သည့် သူ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကို သည်ငွေတွေနှင့် လဲပစ်ရမှာတော့ နှမျောစရာကောင်းသည်။
လမ်းမတန်းပေါ်တွင် ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေ အတင်းတိုးဝှေ့နေ၏။ သည်လူတွေမှာလည်း မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ ကံတရားတွေ၊ ပြ နာတွေ၊ သောကတွေနှင့် လုံးချာလည်နေမှာပဲဟု သူတွေးသည်။ လူတွေ၏ အပြုံးများဟာ ၀တ်ကျေတန်းကျေ ဆန်လာသည်ဟု သူထင်သည်။ သူ့စိတ်၏ ထင်ယောင်ထင်မှားမှုလားတော့ သူလည်း မဝေခွဲတတ်။ တောင်မင်း တောင်ဘက်မှ မိုးတိမ်မည်းမည်းများ ရွှေ့လာနေသည်။ လေက တစ်ချက် တစ်ချက် ဝှေ့သည်။ လေအဝှေ့မှာ မိုးတစ်ဖွဲ နှစ်ဖွဲ လွင့်လာသည်။ လေအဝှေ့မှာ အမှိုက်တစ်စနှစ်စ ပါသည်။
သူ ဆယ်မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်အပြီးမှာ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်ရှေ့ရောက်လာသည်။ ဘဏ်ရှေ့မှာ ခြေစုံရပ်လိုက်တာနှင့် တံခါးက ပွင့်သွားသည်။
`မင်္ဂလာပါရှင့်၊ ဘာကူညီပေးရမလဲ´ ဧည့်ကြိုဝန်ထမ်း တစ်ယောက်က အပြုံးလဲ့လဲ့ဖြင့် နှုတ်ဆက်စကားဆိုသည်။ သူ ဧည့်ကြို ကောင်မလေးက ခပ်တည်တည်ကြည့်သည်။
`သိပ်များများစားစားကြီး အကူအညီတောင်းစရာတော့ မရှိပါဘူး။ ညီမလေးတို့ဘဏ်က အတိုးနည်းနည်းနဲ့ ငွေကျပ် သိန်းငါးရာလောက် ချေးပေးဖို့ပါ။´
ဧည့်ကြိုကောင်မလေး နှုတ်ဆွံ့ပြီး ပါးစပ်ပိတ်သွားသည်။ အဓိပါယ်တစ်မျိုးဖြင့် သူ့ကို စိုက်ကြည့်နေသည်။ ထိုကောင်မလေးကို ချန်ထားရစ်ပြီး ငွေလွှဲကောင်တာဆီ သူသွားသည်။ သူပြောချင်ရာတွေ ပြောချလိုက်ရတော့ စိတ်ထဲပေါ့ပါးသွားသည်။
ငွေလက်ခံသည့် ကောင်မလေးက စောစောက ပေါလန်ကြီးနှင့် စကားပြောတော့ ရွှန်းလဲ့နေပေမ့ သူ့ကျ ခပ်တည်တည် ဖြစ်သွားသည်။ ငွေပုံကြီးတွေ ကြည့်ပြီး သူ သိပ်ငယ်သလို ခံစားလိုက်ရသည်။ သိန်းငါးရာ ထီသာပေါက်လျှင် ကျန်သည့် သိန်းနှစ်ရာနှင့် သည်ကောင်မလေးကို ပစ်ပေါက်ပစ်လိုက်မည်။ သိန်းနှစ်ရာလောက်နှင့်ဆိုလျှင် သည်ကောင်မလေး ရူးသွားမှာ သေချာသည်။ ရုပ်ကခပ်ချောချောလေးဆိုတော့ ရူးသွားလည်း ကြည့်ကောင်းမှာပဲဟု သူတွေးသည်။ သူငွေလက်ခံပြေစာလေးယူပြီး ဘဏ်ထဲမှ တိုးထွက်လိုက်သည်။
အခုတော့လည်း ရာသီဥတုက သူမဟုတ်သလို မိုးတိမ်မည်းမည်းတွေ ကင်းစင်သွားပြီး နေရောင်တွေ ဖြာကျလာသည်။ ဘဏ်ရှေ့မှာ ခိုတွေ တောင်ပံတဖြောင်းဖြောင်း ရိုက်ခတ်နေသည်။ ပန်းချီဆရာ ကိုဖိုးအောင်က ခိုတွေကို အစာကြွေးသည်။
သူ ငွေလွှဲရာက ဆိုင်ထဲပြန်ရောက်တော့ သူ့မိတ်ဆွေ ကိုပိုင်သျှင်မင်းနှင့် ကိုကျော်ရှိန်းတို့ ရောက်နေကြသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်က နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာသည့် အားကစားဂျာနယ်တွေကို သည်းသည်းမည်းမည်း ရပ်ဖတ်နေကြသည်။ သည်နေ့ည တစ်နာရီခွဲမှာ မန်ယူနှင့်ချယ်ဆီး FA Cup ဗိုလ်လုပွဲရှိသည်။
ပိုင်သျှင်မင်းက သူတို့မြို့ကလေး၏ ရုပ်ရှင်မင်းသားဟောင်းကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်မင်းသားဆိုပေမဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေ တော်တော်များများ ရိုက်ခဲ့ရတာတော့ မဟုတ်။ သူက ရုပ်ရှင်ကို အရမ်းခရေဇိဖြစ်တာနှင့် နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်မင်းသမီး တစ်ယောက်ငှါးပြီး ပေတစ်ရာလောက် ရိုက်ကြည့်ဖူးခြင်းဖြစ်သည်။ မိဘတွေလည်း မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ချမ်းသာခဲ့တာဆိုတော့ သူ့မှာ ရူးသွပ်ခွင့်တွေ ရှိနေသည်။ ပိုင်သျှင်မင်းရုပ်ကလည်း မင်းသားဂိုက်ပါသည် ပြောရမည်။ ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနှင့် မဟာနဖူးဆိုတာ အကျယ်ကြီး။ ဒိုင်ဗင်တင်လှက ဟောသလို ဒိုင်ဗင်ထိုးတာဆိုပြီး သူ့ဆိုင်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ တစ်ခါတစ်ရံ ဒိုင်ဗင်တွေ ထိုးပြနေတတ်သည်။ သူစကားပြောလျှင် မြတ်လေးအကြောင်း ပါသည်။ စိတ်လိုလက်ရရှိလျှင် မင်းသားကျော်ဆွေလို သရုပ်ဆောင်ပြတတ်သေးသည်။
ပိုင်သျှင်မင်းအိမ်တွင် `လေပေါ်မှ ဓါတ်ပုံများ´ဆိုပြီး ဓါတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်တစ်ခု ရှိသည်။ လာသည့်လူတိုင်းကို ထိုအယ်လ်ဘမ်ကြီး ဖွင့်ဖွင့်ပြတတ်သည်။ ဓါတ်ပုံအားလုံး လေထဲမှာ ရိုက်ထားသော ပုံတွေချည်း ဖြစ်နေသည်။ တောင်ပူစာပေါ်မှ ခုန်ချပြီး လေထဲမှာ ရိုက်ထားသည့်ပုံ။ ကမ်းပါးကို ကျော်လွှားနေသည့်ပုံ၊ အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မှ ခုန်ချထားတုန်း ရိုက်ထားသည့်ပုံ။ နဂါးပုံကျောက်ဆောင်ကြီးပေါ်မှ ခုန်ချနေသည့်ပုံ။ ပိုင်သျှင်မင်းကတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း လေထဲမှ ဓါတ်ပုံတွေချည်း စုဆောင်းထားသည်။
ပိုင်သျှင်မင်းက အင်္ဂလိပ်စကားပြောလည်း ကောင်းသည်။ ဒွတ်ဒက်ရွှတ်ရှက်တွေ တော်တော်ပြောတတ်သည်။ ပြင်သစ်စာကလည်း တတ်သေးသည်။ သူစကားပြောလျှင် `ကိုယ်က အဲဒါတွေ ဆယ့်သုံးနှစ်သားကတည်းကတတ်တာ´ဟု မာန်ပါပါ ပြောတတ်သည်။ သူ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ကျင့်တာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသည်။ ခေတ်သစ်ရုပ်ရှင်ရုံမှာ နိုင်ငံခြားကားပြလျှင် ရှေ့ဆုံးမှာ နေရာယူသည်။ သူ့ကက်ဆက်လေးထုတ်ပြီး မင်းသားကြီးများ၏ ပြောစကားများကို အသံဖမ်းယူထားသည်။ အိမ်ကျတော့ ပြန်ဖွင့်နားထောင်ပြီး လေ့ကျင့်သည်။ လေယူလေသိမ်းနှင့် အသံအနေအထားတွေ မှန်အောင် အထပ်ထပ် ကြုးစားသည်။ လူထူထူရှိလျှင် သူကျက်ထားတာတွေကို ပြန်ရွက်ပြတတ်သည်။
ပိုင်သျှင်မင်းက သူတို့ အဖွဲ့တွေနှင့် ဆုံမိလျှင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် လိုက်ထိုင်တတ်သည်။ဒါပေမဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှ လက်ဖက်ရည်ကို ဘယ်တော့မှ မသောက်။ရေနွေးကြမ်းသောက်လျှင်တောင် ဘေးအိတ်ထဲထည့်ဆောင်လာသည့် မက်ခွက်ကလေးထုတ်သောက်သည်။သောက်ပြီး ပြန်သိမ်းသည်။အခုနောက်ပိုင်း ဘီပိုး၊စီပိုးနှင့် အခြားရောဂါဆန်းတွေပေါ်လာကတည်းက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တောင် လိုက်မထိုင်တော့။ပိုင်သျှင်မင်းက အသန့်အပြန့်ကြိုက်သည်။သူဆိုင်ထဲမှာ တံမြက်စည်းလှဲမလို့ ဘောလုံးသင်းအားပေးတာတောင် သူတို့နှစ်ယောက်က ဆန့်ကျင်ဘက်။ပိုင်သျှင်မင်းက အင်္ဂလန်အသင်းနှင့် မန်ယူပရိသတ်။ကိုကျော်ရှိန်းက အာဂျင်တီးနား အသင်းနှင့် ချယ်ဆီးကို အားပေးသည်။ကိုကျော်ရှိန်း ခံယူချက်ကလည်းပြင်းသည်။မြန်မာတွေကို ကျွန်လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေမို့အားမပေးတာတဲ့။ အင်္ဂလန်အသင်းကန်တဲ့နေ့မျိုးဆိုလျှင် ကိုကျော်ရှိန်းက ဘောလုံးပွဲရုံထဲဝင်ပြိး အင်္ဂလန်အသင်းသားတွေကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီး ဆဲနေတတ်သည်။အင်္ဂလန်အသင်းနှင့် အာဂျင်တီးနား မတည့်သလို ပိုင်သျှင်မင်းနှင့် ကိုကျော်ရှိန်းကလည်းမတည့်။မန်ယူ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားရ၊မရ ငြင်းရင်း ဟိုတစ်နေ့က ထိုးမယ် ကြိတ်မယ်တွေ လုပ်နေလို့ မနည်းဆွဲယူရသည်။
ဟိုးအရင်က အချိန်ရလျှင် ကိုကျော်ရှိန်းက သူ့ကို ဘာသာရေးအကြောင်းတွေ လာဆွေးနွေးတတ်ပေမဲ့ ရန်ဖြစ်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်း ဘာသာရေးအကြောင်း သိပ်မပြောတော့၊ဒေါသတွေ လွန်ကဲနေလို့လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ ခဏနေတော့ စကားမပြော ဘာမပြောနှင့် ဆိုင်ထဲမှ စိုက်စိုက် စိုက်စိုက် ထွက်ခွါသွားကြသည်။
နေစောင်းသွားပြီး အမှောင်ရိပ်သန်းလာလျှင် သူ့ဆိုင်လေးက အလင်းရောင်မရဘဲ မည်းမှောင်သွားတတ်၏။ လျှပ်စစ်မီးကလည်း ပြတ်တောက်နေသည်။
သူဖယောင်းတိုင်လေးတစ်တိုင်ထွန်းပြီး စားပွဲပေါ်တင်ထားလိုက်သည်။ ဖယောင်းတိုင်ကလေးက မှိန်ရာမှ လင်းလာသည်။ အရှိန်ရပြီး ပိုမိုတောက်ပလာသည်။ အလင်းရောင်တွေ တောက်ပနေပေမဲ့ ဖယောင်းတိုင်ကလေးက တဖြည်ုးဖြည်း တိုဝင်သွားသည်။
သိပ်စဉ်းစားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ မိတ်ဆွေစာရေးဆရာတစ်ယောက်ပြောပြသည့် အိန္ဒိယ၀တ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်ကို သတိရနေမိသည်။ စာရေးဆရာနာမည်ကိုတော့ ကောင်းကောင်းမမှတ်မိ။
နိုင်ငံအစွန်အဖျားရွာလေးတစ်ရွာ၏ မူလတန်းကျောင်းကလေးသို့ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်၏ ခရီးစဉ်ရှိသည်။ ၀န်ကြီးချုပ်ကို ကြိုဆိုဖို့ ၀တ်ကောင်းစားလှ ၀တ်နိုင်သည့်ကလေးတွေကို ဆရာမက ရွေးချယ်သည်။ ကလေးမလေးတစ်ယောက်က သိပ်ဆင်းရဲနေတော့ ဆရာမချန်ထားရစ်ခဲ့သည့် ကလေးတွေထဲပါသွားသည်။ သည်ကလေးမလေးက ၀န်ကြီးချုပ်ကိုလည်း တွေ့ချင်သလို ကြိုဆိုရေးတံဆိပ်ဝိုင်းလေးလည်း ရချင်သည်။ တံဆိပ်ဝိုင်းကလေး ရချင်သည့်အကြောင်းပြောပြီး သူ့အဖေကို မရမကပူဆာသည်။ တငိုငို တရီရီ လုပ်နေသည်။ ဆင်းရဲတာ တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ သည်အခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်မခံနိုင်ဘူးပြောပြီး ကလေးမလေးအဖေက ကျောင်းလိုက်သွားသည်။ ကလေးမလေးအဖေ ကျောင်းရောက်တော့ ၀န်ကြီးချုပ်က ကျောင်းဝန်းထဲမှ ပြန်ထွက်လာနေပြီဖြစ်သည်။ ကလေးမလေးအဖေက အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြပြီး ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် ၀င်တွေ့သည်။ ၀န်ကြီးချုပ်က ကလေးမလေးကို ပြန်ခေါ်ခိုင်းသည်။ သူကိုယ်တိုင် တံဆိပ်ဝိုင်းလေး ရင်ဘတ်ထိုးပေးမယ်ပြောသည်။ ကလေးမလေးအဖေက ကလေးမလေးကို ပြန်ခေါ်သည်။ ၀န်ကြီးချုပ်က တံဆိဝိုင်းလေးကို ရင်ဘတ်မှာထိုးပေးဖို့ တပြင်ပြင်လုပ်နေပေမဲ့ ကလေးမလေးမှာ ရင်ထိုးထိုးစရာ အင်္ကျီမပါဖြစ်နေသည်။ ၀တ္ထုကျောရိုးက ဒါပဲဖြစ်သည်။
သူ့မှာ နှစ်နှစ်ပိုပိုချစ်စရာ သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိသည်။ သမီးလေးက သူတို့ဇနီးမောင်နှံ ပြန်မလာမချင်း အိမ်ရှေ့ထွက်ထိုင်ကာ စောင့်နေတတ်သည်။ သမီးလေးဘေးမှာ ဖယောင်းတိုင်လေးတစ်တိုင် ထွန်းထားမည်။ ဖယောင်းတိုင်လေးက လေတိုင်းလျှင် ငြိမ်းသွားတတ်သည်။ သမီးလေးက အမှောင်ထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း ငုတ်တုတ်ထိုင်ရင်း မအိပ်မနေ စောင့်နေလိမ့်မည်။
သူဆိုင်တံခါးကို စောစောပိတ်ပစ်လိုက်သည်။ ကောင်းကင်မှာ မိုးတိမ်မည်းတွေ တလိပ်လိပ်တက်လာနေသည်။ မိုးက တကယ်ပဲ အငြိုးနဲ့ ရွာတော့မှာလား။ ။
Posted by ထက်နိုင် at 6:59 AM0comments
မိုးကတဖွဲဖွဲနှင့် စိမ့်ကျနေသည်။ ရေဒီယိုမှ သည်နေ့ တိမ်အသင့်သင့် ဖြစ်ထွန်းရုံမှလွဲရ်ျ ရာသီဥတုသာယာပါသည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်သော်လည်း သူတို့မြို့လေးမှာ မိုးတွေ တစိမ့်စိမ့်ရွာချခဲ့သည်မှာ ဆယ်ရက်ပင် ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
မြို့ကလေး၏ အနိမ့်ပိုင်းရပ်ကွက်တွေမှာ ရေတွေ လျှံစပြုနေပြီဖြစ်သည်။ ကားလမ်းတွေတောင် ရေလွှမ်းပြိးလမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်နေသည်။ အသွားအလာပြတ်တောက်နေ၏။ စတိုးဆိုင်မှာပစ္စည်းသစ်တွေ မရောက်လာတော့ဈေးဝယ်က ကျဲတောက်နေသည်။ သူအရောင်းစာရေးမလေး နေခြည်နှင့် ပိုက်ပိုက်ကို ဆိုင်စောင့်ထားခဲ့ပြီး ပန်းချီအလုပ် ခန်းဘက် ထွက်လာ ခဲ့သည်။
သူဒီမြို့ကလေးမှာအပျော်တမ်းပန်းချီဆရာလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ပန်းချီအနုပညာနှင့် သိပ်မပတ်သက်သော အလုပ်တွေကို ပိုလုပ်ဖြစ်သည်။ သူကမင်္ဂလာဆောင် အခမ်းအနားတွေ ပြင်သည်။ ကျောက်မျက်ဖက်စပ် ဆိုင်းပုဒ်လေးတွေ ရေးသည်။ ဘရိတ်ဓားလေးနှင့် ခဲပန်းချီပုံတူဆွဲသည်။ ကျောက်ပန်းချီရေးသည်။ သူ့စိတ်ထဲ ဆာလောင်မှုတွေ ပေါက်ကွဲလာမှသာ ပန်းချီကားတစ်ကားကို သူစိတ်တိုင်းကျ ရေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။သည်နေ့ သူ တစ်ခုခုကို မွတ်သိပ်ဆာလောင်နေခဲ့သည်။
သူ့ပန်းချီ အလုပ်ခန်းက ကားဂိုဒေါင်ကို တစ်ခြမ်းပိတ် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသည့် ပန်းချီခန်း ထောင့်တစ်ထောင့်မှာ သူဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ သူ့စိတ်ကို ဗလာနယ်ရောက်အောင် ပစ်တင်လိုက်သည်။ ဒါက သူပန်းချီရေးခါနီးတိုင်း လုပ်လေ့လုပ်ထရှိသောစိတ်လေ့ကျင့်မှုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
စိတ်တည်ငြိမ်နူးညံ့လာမှ အခန်းထောင့်မှ ထောင်ထားသည့် စတန်းကို ဆွဲယူသည်။ ကင်းဗတ်ကြပ်ပြီးသားပန်းချီးကား ဘောင်ကို တင်သည်။ Pallette ကို မယူပြီး ဆေးတွေ ညှစ်ထည့်သည်။ သူ ပန်းချီကားတစ်ကား ရေးတိုင်း အနီနှင့်အ၀ါကို ခပ်များများ ထည့်သုံးသည်။ အနီ ဒါမှမဟုတ် အ၀ါတစ်မျိုးမျိုးကို ကင်းဗတ်ပေါ်တင်ပြီးမှသာ တခြားအရောင်တွေကို တွဲစပ်ထည့်သည်။ သူက ပန်းချီကားဆိုလျှင် အရောင်တွေပြတ်သားနေမှ ကြိုက်သည်။
သူကင်းဗတ်ပေါ်မှာ အခံဆေးဖြူဖြူတွေ ခပ်ကြမ်းကြမ်းသုတ်ပစ်လိုက်၏။ သူ့ အာရုံမှာ ခဏခဏလာငြိသည့် ပုံရိတ်တစ်ခုကို အမိအရ ဖမ်းယူပြီး ပုံကြမ်းကောက်သည်။ သူ့အာရုံက ပုံရိတ်ပေါ်မှာ လူးလွန့် ကျက်စားနေသည်။
သူ လောကကြီးကို မေ့သွားသည်။ ပုံရိတ်က ပန်းချီကားတစ်ချပ်အဖြစ် တဖြည်းဖြည်း အသက်ဝင်ပုံပေါ်လာသည်။ စုတ်ချက်အဖြစ် တဖြည်းဖြည်း အသက်ဝင်ပုံပေါ်လာသည်။ စုတ်ချက်တွေက စိတ်၏စေစားရာတသွေမတိမ်း လိုက်နာသည်။ သူ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ ထပ်ဖြည့်သည်။ အလင်းအမှောင်နှင့် အရောင်အနုအရင့်တွေ ချိန်သည်။
လှိုင်းကလေးတွေလို လွင့်နေသည့် ဆံပင်တွေ
ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ရွှန်းလဲ့နေသည့် မျက်ဝန်းတစ်စုံ
စိုပြေဖောင်းအိ၊ ပိရိသေသပ်သည့် နှုတ်ခမ်း
ကျက်သရေရှိသည့် ခန္ဒာကိုယ် အချိုးအဆစ်တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားသော ဂုဏ်သရေရှိမိန်းမ။
ပန်းချီကားထဲမှ အမျိုးသမီးက သူ့ကို မခို့တရို့ ပြုံးပြနေသည်။ အာရုံတွေေ၀၀ါးလာသည်။ သူ့ရင်တွေ ခုန်ပြီး အသက်ရှုမြန်လာသည်။ သူ စကားပြောဖို့ ကြိုးစားကြည့်သည်။ မောဟိုက်နွမ်းလျစွာ စကားလုံးတစ်ချို့ထွက်ကျလာသည်။
မင်းဟာသိပ်ချစ်စရာကောင်းတာပဲ၊ မင်းကို ကိုယ်သိပ်ချစ်တယ်
အချစ်……ဘာကိုပြောတာလဲ။ အချစ်ဆိုတာကို ကျွန်မမသိဘူး
သူ တစ်ချက်ငိုင်သွားသည်။ အချစ်ဆိုတာကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်သည်။ သူနားလည်သလောက် အချစ်ကို အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်သည်။
လိင်မတူတဲ့ ယောကျာ်း တစ်ယောက်က မိန်းမတစ်ယောက်ကို မွတ်သိပ်တောင့်တလာတယ်။ မေတ္တာသက်ဝင် ချစ်ခင်လာတယ်။ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ချစ်တယ်ပြောပြီး နှစ်ကိုယ်တစ်ဘ၀ ထူထောက်ကြတယ်။ သားသမီးတွေ ပွားစီးကြတယ်။ အဲသလိုနဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့ လူမှုဘ၀တွေကို ထူထောက်ကြတယ်။ ရယူပိုင်ဆိုင်တာ အချစ်တဲ့။ ကိုယ်က အဲသလို မယူဆဘူး။
ကိုယ်မင်းကို မြတ်နိုးတယ်၊ ရယူဖို့လည်း မဟုတ်ဘူး၊ ပိုင်ဆိုင်ဖို့လည်း မဟုတ်ဘူး။ မင်းကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေချင်တယ်။ ခုလို မင်းပုံရိပ် ကလေးကိုယ့်အနားမှာ ရှိရင် ကိုယ်ကြည်နူးတယ်။ အရာရာပြည့်စုံတယ်လို့ ကိုယ်ထင်တယ်။ သည့်ထက်တော့ မင်းနားလည်အောင်ကိုယ်ပြောပြနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး
အမျိုးသမီး တွေသွားသည်။ ရှင်တို့ လောကက စိတ်ဝင်စားစရာပဲဟု တိုးတိုးဖွဖွ ပြောသည်။
ရှင်တို့လောကက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ကျွန်မကို လောကကြီးထဲ ထွက်ခွာပြီးလေ့လာခွင့်ပေးနိုင်မလား
မင်းဟာ မင်းဖြစ်သွားကတည်းက မင်းကို ကိုယ်မပိုင်ဆိုင်တော့ပါဘူး။ မင်းစိတ်ကြိုက်လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆုံးဖြတ်နိုငပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းထင်သလို လောကကြီးက………….
သူ့စကားတွေက ပြေရင်းတန်းလန်း လေထဲမှာ ရပ်တန့်သွားသည်။ သူအမျိုးသမီးစိတ်ကို ထွင်းဖောက်ကြည့်သည်။ သူမစိတ်ထဲမှာ သိချင်စိတ်တွေ ပေါက်ကွဲ ရုန်းကြွနေသည်။ ဘယ်အရာကမှသူမကို တားဆီးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သူနားလည်လိုက်၏။ အမျိုးသမီးက ခပ်ထေ့ထေ့ တစ်ချက်ပြုံးသည ။
အမျိုးသမီးက ပန်းချီကားထဲမှ တစ်လှမ်းချင်း လှမ်းထွက်ပြီး သူ့ကို ချန်ထားရစ်ခဲ့သည်။
ပန်းချီကားရှေ့မှာ ကျောက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို သူ ငြိမ်သက်နေမိသည်။
သူမအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး စိတ်ဝင်စားစရာချည်း ဖြစ်နေသည်။ မြင်မြင်သမျှသည် အသစ်အဆန်းနှင့် စူးစမ်းချင်စရာချည့်။ ပန်းချီဆရာ သူမကို ဂုဏ်သရေရှိမိန်မ တစ်ယောက်အဖြစ်မွေးပေးလိုက်ပေမယ့် သူမ စိတ်က တစ်စုံတစ်ရာကိုဆာလောင်နေခဲ့သည်။ သူမအသက်ရှင်သန်ဖို့ အာဟာရတစ်ခုတော့ လိုအပ်သည်။
ခန္ဒာကိုယ်၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သူမှတစ်ချက်ငဲ့စောင်းကြည့်သည်။ အနီးစပ်ဆုံး စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုထဲ သူမတိုးဝင်လိုက်သည်။ အခန်းထောင့်မှ လွတ်နေသော စားပွဲတစ်ခုဆီ သူမဦးတည်လိုက်သည်။ မီနူးကို ကြည့်ပြီး စားစရာတစ်ခုမှာသည်။ သူမစိတ်ကို ဖြေလျော့ပြီး ခပ်နွဲ့နွဲ့ထိုင်သည်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာ အဖော်မပါ တစ်ကိုယ်တည်း။ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အထူးအဆန်းဖြစ်နေသည်။ စားပွဲထိုးလေး လာချပေးသည့် ခေါက်ဆွဲကြော်တစ်ပွဲကို သူမ စိမ်ပြေနပြေစားသည်။
လွတ်နေသည့်စားပွဲတွေမှာ လူတွေ တဖွဲဖွဲ ရောက်လာသည်။ ကိုယ့်အဖွဲ့နှင့်ကိုယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် စကားတွေ ပြောနေကြသည်။
သည်တစ်ပွဲတည်းနဲ့တင်ကိုယ့်အတွက် ဆယ်ပုံးနီးနီး စိုပြေသာါးတယ်။ ကဲ ကိုယ့် အောင်မြင်မှုအထိမ်းအမှတ်……….
စားသောက်ဆိုင်လေးထဲတွင်ဖန်ခွက်ချင်းထိခတ်သံတွေ ဆူညံသွားသည်။ လူသားတွေရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာ ညနေခင်းစားပွဲတွေမှာ အဆုံးသတ်သွားတာဟုသူမမှတ်ယူလိုက်သည်။
သူမ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာနေမိသည်။ ခဏနေတော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆိုင်ထဲ လှမ်းဝင်လာသည်။ ထိုအမျိုးသမီးက စားသောက်ဆိင် ထောင့်တစ်ထောင့်တွင် ခပ်ငူငူထိုင်နေသော အမျိုးတစ်ယောက်ဆီ တန်းတန်းမတ်မတ် ၀င်ရောက်သွားသည်။
ဒီမှာ ကိုကျော်စွာရှင်ကဒီမှာတစ်ယောက်တည်း လွပ်မြောက်နေတာပေါ့လေ။ ကျွန်မမကြိုက်တဲ့ ဒီအရည်တွေကို သောက်တယ်။
ရှင့်မှာသား နဲ့မယားနဲ့ဆိုတာလည်း သတိရပါဦး။ ကျွန်မမျက်နှာမထောက်ထားရင်တောင်သမီးလေးမျက်နှာ ထောက်ထားသင့်တယ်။ အဖျားတက်နေတဲ့သမီးလေးက ရှင့်ကိုတစ်မေးတည်းမေးနေတယ်။
စားသောက်ဆိုင်ကလေးကိုချန်ထားရစ်ခဲ့ပြီး မြို့ကလေးထဲ သူမတိုးဝင်လိုက်၏။ လမ်းမပေါ်တွင်ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေဥဒဟိုဖြတ်သန်းနေကြသည်။ ပြည်သူ့ဆေးရုံကို ကျော်တော့ပန်းခြံတစ်ခု တွေ့သည်။ ပန်းခြံကလေးထဲတွင် ရောင်စုံပန်းများ ဖူးပွင့်ဝေဆာနေသည်။ လိပ်ပြာကလေးများ ဟိုဒီပျံဝဲ၏။ ခိုကလေးများက တောင်ပံ တဖြောင်းဖြောင်းရိုက်ခါ ညမွှေးပန်းရုံတွေပေါ် နားသည်။ သူမမုန်ညင်းစိုက်ခင်းကလေးများကို အစဉ်အတိုင်း ဖြတ်ကျော်လိုက်၏။
ဈေးနားရောက်တော့ မိုးတွေ ခပ်စိတ်စိတ် ကျလာတာနှင့် အရိပ်တစ်ခုမှာ ခဏ ၀င်ခိုလိုက်သည်။ အရိုးပြိုင်းပြိုင်းထနေသည့် အဘိုးအိုတစ်ယောက်က စက်ဘီးတစ်စီးကို စိတ်ရှည်လက်ရှည ပြင်ဆင်နေသည်။ စမုတ်တံ တင်နေသည့် သံချေးတွေကို ကော်ပတ်ဖြင့်စားသည်။
ထိုအဘိုးအိုဘေးတွင် ခပ်ဖိုင့်ဖိုင့် အဘိုးအိုတစ်ယောက်ဂျာနယ်တစ်စောင် ကိုင်ကာ ကျကျနနကြီးထိုင်နေသည်။
ဟော့ဖြစ်သွားသည့် သတင်းတစ်ခုအကြောင်းပြောရင်း အခြားအကြောင်းအရာဘက် ရောက်သွားကြသည်။ ခပ်ဖိုင့်ဖိုင့် အဘိုးအိုက
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အနာဂတ်ကတော့ စိတ်မကောင်းစရာဘဲဗျ။ ဟိုတစ်လောက သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဟိမ၀န္တာကို မြစ်ဖျားခံစီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်ကြီးငါးစင်းအကြောင်း၊ ဒီရာစုနှစ်ကုန်ခါနီးမှာအဲဒီမြစ်ကြီး ငါးစင်းလုံးရေတွေခမ်းခြောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတော့ ရေခဲပြင်တွေဟာ ခပ်မြန်မြန် အရည်ပျော်နေတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း သဘာဝလောက၏ နိဂုံးဆိုပြီးအော်နေကြတယ်။ စက်မှုထွန်းကားလာတော့ အဆိပ်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့် မြစ်တွေဟာ မသန့် မရှင်းဖြစ်လာတယ်။ သစ်တောတွေလည်း ပြုန်းတီးလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မကြုံဖူးတဲ့ အက်ဆစ် ငရဲမီးမိုးတွေ ရွာချလာပြီ။ လေထုထဲမှာလည်း ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့တွေ တိုးပွားလာနေတယ်။ မြေဆီလွှာတွေခမ်းခြောက်ပြီး သဲကန္တာရတွေဖြစ်ထွန်းလာတယ်။ တစ်ချိ့ အပင်နဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေဟာ မျိုးတုံး ပျောက်ကွယ်သွားကြပြီ
အဘိုးအိုက သိပ်ပင်ပန်းသွားဟန် သက်ပြင်းတစ်ခုမှုတ်ထုတ်ပြီး ရေနွေးကြမ်းခါးခါးတစ်ခွက်ကို ဂွတ်ကနဲနေအောင် မော့သောက်ပစ်လိုက်၏။ အဘိုးအိုက အနီရောင်တောက်နေသည့် သူ့အကြည့်ကို ပစ်တင်လိုက်သည်။
သိပ်လည်း သောကရောက်မနေပါနဲ့ဗျာ။ ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကောင်းချည်းပဲပေါ့။ ကံသာအမိ၊ ကံသာအဖပါဗျာ။
စက်ဘီးပြင်နေသည့် အဘိုးအိုက စကားကို ထောက်ပေးသည်။
ကိုမှတ်တင် ခင်ဗျားကို ကျွန်တော်မကြိုက်တာ အဲဒါပဲဗျာ။ နေရာတကာ ကံချည့်ပုံချနေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ သစ်ပင်တစ်ပင်ခုတ်ပြီး သစ်ပင်တစ်ပင်ပြန်မစိုက်တာ တာဝန်မကျေပွန်မှုပဲ။ အဲဒါ လူကြီးလူကောင်း မဆန်တာပဲဗျ။ အဲဒါ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်နေတာဗျ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူကြီးလူကောင်းဆန်ရမယ်
စက်ဘီးပြင်နေသည့် အဘိုးအိုက အားပါးတရကြီး ရယ်မောပစ်လိုက်သည်။
လူကြီးလူကောင်းဆန်ရမယ် ဟုတ်လား။ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘယ်သူတွေက လူကြီးလူကောင်းဆန်နေလို့လဲ ပြောပါဦးဗျ။ အနုမြူတွေ အပြိုင်အဆိုင် ထုတ်နေတာ လူကြီးလူကောင်းဆန်တာလား။ ကမ္ဘာကြီးက မယဉ်ကျေးသေးပါဘူဗျ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီကနေ တစ်စုံတစ်ယောက်က ရယူဖို့ကြိုးစားနေတာတွေဟာ လူကြီးလူကောင်းဆန်မှုလား
မိုးတိတ်သွားတာနှင့် အရိပ်အောက်မှ သူမ ပြန်လည် ထိုးထွက်လိုက်သည်။ လမ်းမတန်း ပေါ်မှာဆိုင်ကယ်တွေ ကားတွေပြန်လည် စည်ကားစ ပြုနေပြီဖြစ်သည်။ အဘိုးအိုနှစ်ယောက်က အမိုးကျဉ်းကျဉ်းလေးအောက်မှာ အသံတွေ တိုးသွားလိုက်၊ ကျယ်သွားလိုက်။
နေလုံးက အကျဘက်ပိုင်းသို့ ယိမ်းယိုင်စပြုနေပြီဖြစ်သည်။ သူမခြေလှမ်း တွေကို ခပ်သွက်သွက် ဆန့်ထုတ်ပစ်နေမိသည်။ သူမညဈေးတန်းကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်လိုက်သည်။ လမ်းမီးတိုင်လေးများမှာ မီးရောင်ပြိုးပြက်စပြုပြီ။ ညဈေးတန်းလေးကျော်တော့ သစ်ပင်တစ်ပင်လို ယိမ်းထိုးနေသည့် လူတစ်ယောက်က သူမကို ၀င်တိုးသည်။
သူမရေဆိုးမြောင်းတစ်ခု ထဲဝုန်းခနဲ ပြုတ်ကျ၏။
ကောင်းတယ်။ ကောင်းတယ်။ ဒါသင်ခန်းစာပဲ။ မင်းခြေထောက်တွေ မြဲမြဲမတ်နိုင်သရွေ့မင်းအခုလို ပြုတ်ကျနေမှာပဲ။ မင်းကိုယ်မင်း လူဖြစ်ချင်တာ သေချာချင်ရင် မြဲမြဲတောင့်မတ်ထားဖို့လိုတယ်။
ထိုလူကသူပြောချင်ရာတွေပြောပြီးသူမကို ချန်ထားရစ်ခဲ့သည်။ သူမ လေးဘက်သွားပြီး ရေမြောင်းထဲမှ ပြန်ထသည်။ သူမလူတွေကို နားလည်ဘူး။ လူပီသအောင် ဘယ်လိုကျင့်ကြံနေထိုင်ရမှာလဲ။ သူမသစ်ရွက်တစ်ရွက်လို လေထဲမှာ လွင့်နေသည်။
ခဏနေတော့ သူမ အနားမှန်လုံကားကြီးတစ်စီး ထိုးရပ်သည်။ ဘရိတ်တွေ ကျွိခနဲ မြည်သွားသည်။ မှန်တံခါးက တဖြည်းဖြည်း ပိကျသွား၏။ အဆီပြန်မျက်နှာတစ်ခု ရိပ်ခနဲ ပေါ်လာသည်။
ကိုယ်နဲ့ လိုက်ခဲ့ဖို့ မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား
ရှင်……….ကျွန်မက ရှင်နဲ့ လိုက်ရမယ်။ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း နေလို့ မဖြစ်ဘူးလား
ကားက ၀ူးခနဲ ဆောင့်ထွက်သွားသည်။ သူမ ခပ်မဲ့မဲ့ တစ်ချက်ပြုံးသည်။ မုန့်မျိုးစုံရောင်းသည့် စတိုးဆိုင်ကြီးတစ်ခုထဲ သူမ၀င်လိုက်သည်။ မုန့်ဆိုင်ထဲမှာ လူတွေ ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်ကားနေ၏။ သူမစိတ်ကြိုက် မုန့်တစ်မျိုးဝယ်ပြီး ပြန်ထွက်လိုက်၏။ မုန့်ဆိုင်၏ ဘေးအဆောက်အဦးမြင့်မြင့်ကြီး၏ အရိပ်အောက်ကလေးတစ်ယောက်ရှိုက်ငိုနေသည်။
သူမ ကလေးအနား ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်သည်။ ကလေးမျက်နှာတွေက ဖောသွပ်ရောင်ကိုင်းနေသည်။ ကလေး၏ မျက်ရည်တွေကို သူမယုယုယယသုတ်ပေးသည်။
အဖေက အချုပ်ထဲမှာ၊ အမေက မရှိတော့ဘူး။ တခြားယောကျာ်းတစ်ယောက်နဲ့လိုက်ပြေးသွားတယ်။ သားသားထမင်းမစားရတာသံုးရက်ရှိပြီ ကလေးကတစ်ချက်ကြိတ်ရှိုက်၏။
သူမ နင့်ခနဲ ခံစားလိုက်သည်။ ၀ယ်ထားသည့် မုန့်ကလေး ကလေးငယ်ကို ပေးလိုက်သည်။ ကလေးက မုန့်ကို အငမ်းမရ စားသည်။ သူမ ကလေးနဖူးကို သပ်ပေးပြီးထိုနေရာမှထွက်ခွာလာခဲ့သည်။
သူမ တခြားတစ်နေရာကို သွားဖို့စိတ်မပါတော့ပါ။ အားအင်ကုန်ခမ်းသလိုခံစားလိုက်ရသည်။
ပန်းချီခန်းဘက်ပြန်လှည့်လိုက်၏။ တံခါးပေါက်ကို ခပ်ဆဆ ခေါက်သည်။
ရှင်မပြန်သေးဘူးလား မင်းပြန်လာမှာ သိလို့ စောင့်နေတာ
ရှင် မင်းပြန်လာမယ်ဆိုတာကိုယ်သေချာ သိနေတယ်။ ကိုယ်ပြောတယ် မဟုတ်လား။ လောကကြီးဟာ…………
သူက စကားကိုတစ်ဝက်တစ်ပြတ်နှင့် ရပ်နားထားလိုက်သည်။
သူမ လေးတွဲ့စွာ ပန်းချီကားထဲ ပြန်ဝင်သွားသည်။ ထိုအမျိုးသမီးပြန်လှည့်မလာခင် သူက ပန်းချီကားကို အခံဆေးဖြူများဖြင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်းသုတ်ပစ်လိုက်၏။
သူ့အတွက် ရှိခြင်းနှင့်မရှိခြင်းဟာအတူတူသာဖြစ်သည်။ သူပန်းချီကားကို ကျောခိုင်းထွက်ခွာလာခဲ့သည်။
Posted by ထက်နိုင် at 6:57 AM0comments
ရာသီဥတုက အရမ်းပူတာပဲ ဖေဖေ။
အပြင်မှာတည်ငြိမ်အေးဆေးသလောက် ရင်တွင်းက တဟီးဟီးပေါက်ကွဲတယ်
သားတို့မှာ “ည” သာမရှိရင် အမှောင်တွေကို တောင့်တနေရဦးမယ်
ဒီဇတ်လမ်းမှာ ဇာတ်သိမ်းခန်းကို မာတိကာမှာ ထားဖတ်ရအောင် ဖေဖေပဲ ပြောခဲ့တာ မဟုတ်လား
ဖေဖေက သားအိမ်မက်တွေ ယူပြီး တစ်နေ့လုံးဘယ်လျှောက်သွားနေတာလဲ
သားအိပ်ရာထတိုင်း ဖေဖေကို မတွေ့ဘူး
အဲဒီလောက် အလုပ်တွေကြိုးစားနေရအောင် ဖေဖေက ဘ၀မှာ ဘာကြီးများဖြစ်ချင်နေသေးလို့လဲ
စိတ်ဖိစီးမှုတွေခံပြီး မတန်မရာတွေ မျှော်လင့်မနေပါနဲ့ဖေဖေ
ဒီဘိုးနိုးတို့ ပီတာထရက်ကားတို့ ဖူကူရာမတို့ ပြောတာတွေလည်း ယုံမနေပါနဲ့ဖေဖေ
ဘဘုန်းကြီးပြောတာကတော့ ၂၄ ပစ္စည်းထဲမှာ အဲဒီဟာတွေ ပါပြီးသားတဲ့
ဖေဖေက ညညဆိုလည်း စာတွေပဲ တကုတ်ကုတ်ရေးနေတာ အဲဒီ ကကြီး ခခွေးနဲ့ အေ ဘီ စီ တွေ ရေးမနေပါနဲ့ဖေဖေ
သားကို စွန်တစ်စင်းလောက် ကောင်းကင်ပေါ်တင်ပေးပါလား
သားတို့နဲ့ ဝေးနေတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးကို ဆွဲချချင်လို့ပါ။
သားတို့ စားဝတ်နေရေးအတွက် ဖေဖေတစ်နေကုန်အလုပ်လုပ်နေရတာတဲ့
ခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ် သားကို ဂိုးဖမ်းပေးပါလားဖေဖေရယ်
ရောဘတ်တို ကားလို့စ် လို ဖရီးကစ်ပြင်းပြင်းနဲ့ အဲဒီစားဝတ်နေရေးဆိုတာကြီးကို ကန်ထုတ်ပစ်ချင်လို့ပါ
သားသူငယ်ချင်း “အသားပို” ကတော့ ပြောတာပဲ
မေမေက သချိ င်္ုင်းကုန်းဆိုတာ ဘာလို့ပြောမပြတာလဲ
သချိ င်္ုင်းကုန်းဆိုတာ ဘာလဲမေးတိုင်း မေမေ မျက်နှာပျက်ပျက်သွားတယ်
ဖေဖေကို နားနားကပ်ပြီးတိုးတိုးလေးမေးတော့ သချိ င်္ုင်းကုန်းဆိုတာ လူသေတွေမြှုပ်တာတဲ့
လူဆိုတာ မသေသေးရင်ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်တယ်
အဲဒီ နံရံထူထူကြီးပြိုကျသွားအောင် ဘောလုံးနဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်း ကန်ထုတ်ပစ်လိုက်မယ် ဖေဖေ
နေလည်ရောက်ရင် မေမေလည်း ဖေဖေကို ကူဖို့ အိမ်ကနေထွက်သွားတာပဲ
သားကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ လိမ်ခဲ့ပေမယ့် သားသိတာပေါ့ဖေဖေ
သား သစ်တော်သီးသုပ်တွေ အများကြီးစားပစ်လိုက်တယ်ဖေဖေ
သစ်တော်သီးတွေ အများကြီးစားလို့ ရင်ကျပ်ပြီးဖျားရင် ဖေဖေနဲ့မေမေ သားနဲ့အတူတူနေမှာ မဟုတ်လား
ဖေဖေရယ် မေမေရယ် သားရယ် ရွှေငါးလေးတွေ ရေကူးနေတာကြည့်ကြမယ်
ဖေဖေနဲ့ မေမေလည်း ပြန်မလာသေးဘူး
သားဆွဲချထားတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးနီးလာရင် ကြယ်တွေကို ခူးဆွတ်ပြီး ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းလို ဖရီးကစ်လှလှကန်ဖို့ သားစောင့်နေတာ
ဖေဖေက မသိဘူးလား။ ။
(Beauty မဂ္ဂဇင်း၊ မတ် ၂၀၀၄)
Posted by ထက်နိုင် at 6:58 AM0comments
ရွာဦးကျောင်းမှ တုံးမောင်းခေါက်သံကြားရသည်။ အသံက ခပ်ကျယ်ကျယ် ခပ်ကျဲကျဲကနေ တဖြည်းဖြည်းစည်းချက်ညီညီ ခပ်စိပ်စိပ်ကျလာ၏။ အသံကတိုးပြီး အမှောင်ထဲနှစ်ဝင်သွားသည်။ နောက်ထပ် တုံးမောင်းသံတွေ ထပ်ကျမလာခင် ဘကြီးခင် အိပ်ရာမှလူးလဲထသည်။ သည်အချိန်က ဘကြီးခင် အိပ်ရာထနေကျအချိန်ဖြစ်သည်။ အိပ်ရာဝင်စောသည်ဖြစ်စေ၊ နောက်ကျသည်ဖြစ်စေ၊ သည်အချိန်ဆိုလျှင် ဖျပ်ကနဲ နိုးနေတတ်၏။ တုံးမောင်းသံတွေက သူ့ကို ချော့မြူသလို ဘကြီးခင် ခံစားရတတ်၏။
မျက်နှာသစ်၊ ဆားနှင့်သွားတိုက် ပါးလုပ်ကျင်းပြီး ပုဆိုးခါးပုံစဆွဲကာ မျက်နှာသုတ်သည်။ ပုဆိုးတစ်ထည်ခေါင်းပေါင်းပြီး နွားစောင့်တဲဘက် ဘကြီးခင်ထွက်လာခဲ့သည်။ နွားနှစ်ရှဉ်းကိုနှိုးပြီးသကျင်းမှာ တပ်သည်။ သကျင်းထဲမှာ မနေ့ညက ထည့်ထားပြီးသား စံနဘူမှော်နှင့် မြေပဲရိုးတွေကို အပေါ်ကနေ နှမ်းဖတ်ရည်ဖျန်းပေးလိုက်၏။ နွားတွေက သကျင်းထဲမှာ နှာခေါင်းနှစ်ပြီး ခေါင်းမဖော်စတမ်းစားသည်။ နွားပေါက်လေးတစ်ရှဉ်းက တစ်ချက်တစ်ချက် နှာမှုတ်သံပေးသည်။ တစ်ကောင်နှင့် တစ်ကောင် အစာလုရင်းတွန်းဝှေ့တတ်သည်။ နွားစာကုန်လို့ အချိန်မှီလာမထည့်လျှင် သကျင်းကို ဝှေ့ချတတ်၏။ တစ်ခါတစ်ရံ သကျင်းက တင်ထားသောခွထောက်ပေါ်ကနေ ၀မ်းလျားထိုး ပြုနေတတ်၏။
အလုပ်သမားနှင့် နေ့စားကောင်လေးတွေ သွားမနှိုးခင် သကျင်းထဲ နွားစာတွေအပြည့်ထည့်ထားခဲ့ရသည်။ နွားပြာကြီးတစ်ရှဉ်းက ငြိမ်နေသည်။ စားစရာနွားစာမရှိတော့လျှင် တစ်ကောင်၏ ကျောကိုတစ်ကောင်က လျှာနှင့်လျှက်ကာ မှိန်းနေတတ်၏။ နွားစာတွေပေါ်မှာ နှမ်းဖတ်ရည်လေး ဖျန်းထားခဲ့ပြီး တံရွင်းတစ်ချောင်းဆွဲကာ မြောက်ပိုင်းက မပေါကြည်တို့ မနီတို့ညီအမတစ်တွေဆီ ထွက်လာခဲ့သည်။ သူတို့ညီအမတစ်တွေက ၀ီရိယကောင်းသူတွေဖြစ်ပေမယ့် မနီတို့အိမ်နှင့် ဘကြီးခင်နေသည့် အရှေ့ပိုင်း ဒေါ်ဒေါ်လှအိမ်က တော်တော်လေးလှမ်းသည်။ အမှောင်ထဲမှာ မိန်းကလေးတွေချည်း ထွက်မလာရဲကြ။ လမ်းတစ်ကျောမှာ သူတို့ဖြတ်သန်းလာရမည့် ကိုဂျပန်၏ အင်းခွေးကြီးတွေက ဆိုးသည်။ မဲမဲမြင်ရာ ထိုးဟတ်တတ်၏။ ခြောက်ရုံလန့်ရုံနှင့်လည်း ကြောက်တတ်တာမဟုတ်။
အသက်ငါးဆယ်ကျော်လို့ ဘာသာရေးလုပ်နေပေမယ့် ဘကြီးခင်ကစိတ်ဆတ်သည်။ ဘယ်သူ့အပေါ်မှ မတရားမလုပ်ခဲ့သလို သူ့အပေါ်မတရားလုပ်လျှင်လည်း ချက်ချင်းတုန့်ပြန်တတ်သည်။ တစ်နေ့က မပေါကြည်တို့ ညီအမသွားကြိုရင်း ကိုဂျပန့် အင်းခွေးတွေက ဘကြီးခင်ကိုထွက်ကိုက်သည်။ အော်ငေါက်လို့လည်းမရ။ တံရွင်းနှင့် ယမ်းလို့လည်း နောက်မဆုတ်နှင့် ဘကြီးခင်စိတ်တိုသွားသည်။ သည်ကြားထဲတစ်ကောင်က ဘကြီးခင် ခြေသလုံးကို ၀င်ဟတ်သည်။ ခြေသလုံးမှာ သွားစွယ်ရာအကွင်းလိုက် ဖြစ်သွားသည်။ ဘကြီးခင် နာလည်းနာ ဒေါသလည်းဖြစ်သွား၏။ ခွေးနှစ်ကောင်ကို တံရွင်းနှင့် အသားကုန်ရိုက်လိုက်သည်။ ခွေးတွေက မာန်ဖီပြီးရှေ့ကပြေးသည်။ ဘကြီးခင်က နောက်ကလိုက်သည်။ ခွေးတွေက ခွေးတိုးပေါက်ကနေ အိမ်ထဲတိုးဝင်သွားသည်။ ဘကြီးခင်ဒေါသတွေ မပြေသေးတာနှင့် ကိုဂျပန်ကို လှမ်းနှိုးသည်။ ကိုဂျပန်က အိပ်ချင်မူးတူးနှင့် တံခါးဖွင့်ထွက်လာသည်။ ကိုဂျပန်လည်း တံခါးဖွင့်ထွက်လာရာ ကိုဂျပန်ခြေထောက်အောက်ပိုင်းကို တံရွင်းနှင့်သိမ်းရိုက်ပစ်လိုက်သည်။ ကိုဂျပန် တံခါးပေါက်ဘေးမှာ ပုံပုံလေးခွေကျသွား၏။
" သည်လောက်ဆိုးတဲ့ ခွေးတွေမွေးထားရင်လည်း လုံလုံခြုံခြုံ ထိန်းလေကွာ။ အများပြည်သူသွားတဲ့လမ်းလေးတောင် ဖြောင့်ဖြောင့်မလျှောက်ရဘူး။ မင်းခွေးတွေပဲ ကြောက်နေရတာ။ ခွေးထက်မိုက်တဲ့ မင်းက သည်ခွေးတွေမွေးထားတာပေါ့။ နောက်တစ်ခါငါ့ကိုထွက်ကိုက်ကြည့်၊ မင်းသည်ထက်နာမယ်"
ဘကြီးခင်က ကိုဂျပန်ကို ခပ်ငေါက်ငေါက်လေးပြောပြီး ထော့နဲ့ထော့နဲ့နှင့် အိမ်ဘက်ပြန်လာခဲ့သည်။ ဆေးထိုးဆေးသောက်နှင့် ဘကြီခင်တစ်လလောက် ခံလိုက်ရသေးသသည်။ ပြီးခဲ့သည့်တစ်ပါတ်လောက်တုန်းကလဲ ဆွမ်းခံထွက်သည့် သံဃာတွေကို ကိုဂျပန့်ခွေးတွေ ထွက်ကိုက်လို့ ရပ်ကွက်နှင့် ပြသနာတက်ရသေးသည်။ ကိုဂျပန်ခမျာလည်း ကိုယ်မွေးထားသည့် ခွေးတွေဆိုတော့ စွန့်ပစ်ရလည်းအခက်။ အိမ်မှာဆက်ထားလည်း အဆင်မပြေနှင့် နေ့ရှိသရွေ့သည်ခွေးတွေအကြောင်းပဲ စဉ်းစားနေရသည်။ လှုပ်လှုပ်ရှိ ဘယ်သူ့ကိုများထွက်ကိုက်လေမလဲဟု စိုးထိတ်နေရသည်။
ဘကြီးခင် ကိုဂျပန်အိမ်နားဖြတ်တော့ ခွေးတွေ ခြေသံမကြားရအောင် ခြေထောက်ကိုဖွဖွလေးနင်းရသည်။ ခွေးနှင့်ရန်ဖြစ်ရတာလဲ သိပ်မနှိပ်ဘူးဟု ဘကြီးခင်တွေးဖြစ်လိုက်သေးသည်။ ခွေးဆိုတာလဲ ခွေးလောက်သိမှာဘဲလို့ ဘကြီးခင် တွေးခေါ်ပစ်လိုက်၏။
မပေါကြည်တို့ ညီအမကိုစောင့််ခေါ်ပြီး ဘကြီးခင်အိမ်ဘက်ပြန်လာခဲ့သည်။ အိမ်ရောက်တော့ လည်းမြန်မြန်ကောက်ပြီး အောက်ကိုင်းပြင်ဘက် အသော့နှင်သည်။ နေမထွက်ခင် တစ်ခေါက်လောက်အိမ်ရောက်ထားမှ ဖြစ်မည်။ မပေါကြည်တို့ ညီအမကိုဦးဆောင်ပြီး ပဲရိတ်ခိုင်းရသည်။ ဘကြီးခင်က နေ့စားကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီး ပဲလုံးတွေ လှည်းပေါ်တင်သည်။
သည်နှစ် ရာသီဥတုမှန်ပြီး မိုးလေ၀သကောင်းသောကြောင့် အောက်ကိုင်းမှာ ပဲနီပြားတွေ ခွေးနို့စို့နေသလိုသီးသည်။ ပဲလုံးတွေစီထပ်တင်နေသည့်ကောင်လေးပင် ပဲတောင့်ထိုးရာဗလပွနှင့် ဖြစ်နေ၏။
ဘကြီးခင်က ပဲလုံးတွေကို ခရင်းခွနှင့်ထိုးကော်ပြီး လှည်းပေါ်တင်ပေးသည်။ လှည်းဆောင့်လျှင် ပဲတွေပြုတ်မကျအောင် စနစ်တကျ ထပ်ခိုင်းရသည်။ ပဲလုံးတွေတင်သည့်နေရာမှာ လှည်းဦးမပေါ့အောင် ရှေ့နောက်ချိန်ညှိပေးတတ်ဖို့လိုသည်။ ပဲလှည်းက စနစ်တကျမတင်တတ်လျှင် ကန်ဇင်းပင်ချောင်းအဆင်းမှာ ဟတ်ထိုးလဲပြီး လှည်းမှောက်တတ်သည်။ ဘကြီးခင်က စိတ်ကြိုက်အနေအထားရအောင် ပြုပြင်ပေးပြီး ပဲလုံးတွေတင်သည်။ စိတ်ကြိုက်အနေအထားရောက်တော့မှ ခေါင်ချုပ်ခိုင်းသည်။ ခေါင်တည့်တည့်ကနေ ခရင်းခွကို ထိုးစိုက်ခိုင်းလိုက်၏။
နေ့စားကောင်လေးကို လှည်းပေါ်ကမောင်းခိုင်းပြီး ဘကြီးခင်က လှည်းအောက်ကဆင်းလိုက်သည်။ ဖုတ်ကျင်းတွေ ချိုင့်တွေရောက်လျှင် လှည်းကိုထိန်းမောင်းဖို့ သတိပေးရသည်။ သည်နှစ်ပဲတွေကောင်းတော့ ဘကြီးခင်တို့ အိမ်ဝိုင်းထဲမှာတင် မဆန့်တော့ဘဲ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကျောင်းဝင်းထဲမှာ ပဲတလင်းလုပ်ထားရသည်။
ပဲတလင်းထဲရောက်တော့ ပဲလုံးတွေပြန်ချသည်။ တစ်ရက်လောက်နေပြီး သည်ပဲတွေကိုနယ်ရမည်။ ပဲလုံးတွေနောက်တစ်ခေါက်တိုက်ဖို့ အောက်ကိုင်းထဲပြန်ထွက်ရသည်။ အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ အလုပ်သမားတွေ မနက်စာစားဖို့ ထမင်းကြော်တွေကို ၀င်ယူရသည်။ ထမင်းကြော်တင်မကဘဲ ရေနွေးကြမ်းခရားနှင့် တို့ဟူးသုတ်တွေလည်းပါသည်။ ကိုင်းထဲရောက်တာနှင့် ပဲရိတ်နေသူတွေခေါ်၊ ခဏနားခိုင်းပြီး ထမင်းကြော်စားကြသည်။ ထမင်းကြော်စားပြီး ခြေညောင်းလက်ဆန့် ခဏနားကြသည်။ နားပြီးတာနှင့် ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုယ်ဝင်ပြီး ပဲရိတ်ကြရပြန်သည်။
ဘကြီးခင်ကတော့ ပဲလှည်းနောက်တစ်စီးတင်ဖို့ နွားတွေကိုကောက်သည်။ အလုပ်သမားတစ်ယောက် လှည်းပေါ်တက်ခိုင်းပြီး ပဲလုံးတွေခရင်းခွနှင့်ထိုးပြီး လှည်းပေါ်စတင်သည်။ နေရောင်တွေ ခပ်ပြင်းပြင်းမကျခင် အလုပ်သိမ်းနိုင်အောင် ကြိုးစားရသည်။ နေပြင်းလာလျှင် ပဲတောင့်တွေကွဲအက်ပြီး အလေအလွင့်များသည်။ အခုတောင်နေကလေးစူးလိုက်တာနှင့် ပဲတောင့်တွေက တစ်ဖြောက်ဖြောက်အသံပေးနေပြီ။ နဖူးကချွေးတွေကို ခေါင်းပေါင်းထားသည့်ပုဆိုးစဖြင့်သုတ်ပြီး နောက်ဆုံးပဲလုံးတစ်လုံးကို ဘကြီးခင်ကော်တင်လိုက်၏။ သည်လောက်ဆို စိတ်ချရပြီ။
လှည်းပေါ်ကကောင်လေးကို ဆင်းခိုင်းပြီးနွားတွေချွတ်သည်။ လှည်းဒေါက်ကို ခိုင်ခိုင်ထောက်သည်။ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းစပ်က မြေနုကျွန်းကျူခုံတွေပေါ်မှာ နွားတွေကို ခဏလွတ်ထားလိုက်သည်။ ဘကြီးခင်ပြောင်းဖူးဖက်ဆေးလိပ်ကို မီးညှိပြီး တ၀ကြီးဖွာပစ်လိုက်၏။ ဆေးလိပ်ကို စိတ်ကြိုက်ဖွာပြီးမှ ပဲရိတ်သမတွေဆီ ထွက်လာခဲ့သည်။ ဆယ်နာရီထိုးလျှင်ပြန်ကြဖို့ သတိပေးပြီး ဆေးတက်ဖဲ့နေသည့်အဖွဲ့တွေဆီ ခြေဦးလှည့်လာခဲ့သည်။
ပဲရိတ်ပြီးလျှင် ပဲခင်းကျွတ်တွေကို ထယ်ထိုးရမည်။ ထယ်ထိုးပြီးလျှင် နွှေနှမ်းကျဲဖို့ ပြင်ဆင်ရဦးမည်။ သည်လိုနှင့် ဘကြီးခင်တို့မှာ နားရတယ်မရှိလိုက်ဘူး။ တောင်သူလုပ်ငန်းက ကျယ်တော့သည်လိုနှင့် နှစ်၊ ပတ်သာလည်သွားသည်။ လူကမနားလိုက်ရဘူး။ ပင်ပန်းတယ် ရယ်လို့တော့ ဘကြီးခင် သဘောမထားပါဘူး။ သည်လိုလုပ်နိုင်နေသေးတာကိုပဲ ဘကြီးခင်
ဂုဏ်ယူနေမိသည်။ ခနာကိုယ်ဆိုတာကလည်း ခိုင်းပေးနိုင်မှ ကျန်းကျန်းမာမာရှိတာကိုး။
ဘကြီးခင်နာမည်အရင်းက ဦးခင်ပါ။ အသက်ကလေးရလာတော့ ရွာထဲရပ်ထဲက လူတွေကလေးစားသမှုနှင့် ဘကြီးခင်လို့ပဲခေါ်ကြသည်။ အခုလုပ်နေသည့်အလုပ်တွေက ဘကြီးခင်ဧ။် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တွေလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ လခစားစာရင်းငှါးလား ဆိုတော့လည်း ပြောရခက်နေပြန်သည်။ ပြန်ပြောရလျှင်လည်းအရှည်ကြီး။
အမိန့်တော်ရသူကြီးဦးမြ လက်ထက်ကတည်းက သည်အိမ်မှာ ဘကြီးခင်တို့ အဖေက လူယုံတော်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ခိုင်းစရာလက်ကိုလက်တောင်းရှိလျှင် သူကြီးဦးမြက ဘကြီးခင်တို့အဖေ ဦးဖိုးခိုင်ပဲခိုင်းသည်။ လယ်ခွန်၊ မြေခွန်ကိစတွေ၊ ငွေတိုးကြေးတိုးကိစတွေကအစပေါ့။ ဘကြီးခင်တို့ဖေက သူကြီးဦးမြဧ။် တိုင်ပင်ဖော်တိုင်ပင်ဖက်ဆိုလည်းဟုတ်သည်။ ရှေးဘုန်းကြီးကျောင်းထွက်ဆိုတော့ လောကုတရာစာပေတွေမှာ ကျွမ်းဝင်နှံ့စပ်ဧ။်။ ဗေဒင်လေးဘာလေးလည်း မတောက်တခေါက်ဟောတက်ပြီး တိုင်ရင်းဆေးလေးလည်း ကုတက်သည်။ ဗေဒင်တွေ၊ တိုင်းရင်းဆေးတွေနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျမ်းကြီးကျမ်းခိုင် တော်တော်များများ ဘကြီးခင်တို့ အိမ်စာအုပ်စင်မှာရှိနေသည်။
ဘကြီးခင်တို့အဖေ ဦးဖိုးခိုင်ဆုံးတော့ သူကြီးဦးမြဧ။် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ဘကြီးခင်က လက်ဆင့်ကမ်းတာဝန်ယူခဲ့ရသည်။ ဘကြီးခင်တို့ဖေဦးဖိုးခိုင်ဆုံးပြီး သိပ်မကြာပါဘူး သူကြီးဦးမြက နောက်ဖက်ကမ်းက ပန်းညိုသူ အန်တီလှကို လက်ထပ်ယူလိုက်သည်။ အသက်ခြောက်ဆယ်ကျော်မှ ကံထပ်ပေါ်တယ်ပြောရမှာပါ။ သူကြီးကတော် ဒေါ်မယ်မသေတာတောင် ဆယ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီး သိပ်မကြာပါဘူး သူကြီးဦးမြက အနောက်ဖက်ကမ်းက ပန်းညိုသူ ဒေါ်မယ်မသေတာတောင် ဆယ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီး တစ်ကိုယ်တည်းနေခဲ့တဲ့သူကြီးက ပန်းညိုသူနှင့်တွေ့မှ ကောက်ကာငင်ကာ မိန်းမထပ်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
တိုက်နယ်သူကြီးဦးမြ စွဲစွဲလန်းလန်းဖြစ်တာလဲမပြောနှင့် အန်တီလှက တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ မင်းရုပ်စိုးရုပ်ပေါက်သည်။ အရပ်က ထောက်ထောင်မောင်းမောင်းနှင့် အသားကဖြူသေးသည်။ အညာသူတွေထဲမှာ ရွှေရောင်အသားဝင်းဝါသူက အရှားသားမဟုတ်လား။ သူကြီးဆိုတာ လှလှရေ လှလှရေနှင့် နှုတ်ဖျားကကိုမချဘူး။ သူ့မိန်းမလေးကို ငုံထားမတက်ကို ဖူးဖူးမှုတ်ချစ်ခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့် ဇရာကိုတော့ ဘယ်သူ့မှ မတွန်းလှန်နိုင်ဘူးမဟုတ်လား။ အိမ်ထောင်သက်သုံးနှစ်လောက်မှ သူကြီးဦးမြ လူကြီးရောဂါနှင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရှာသည်။ ဒူးတွေခွေခေါက်ကာ သတိမေ့လဲသွားပြီး သတိပြန်လည်မလာတော့တာ။
ဘကြီးခင်နှင့် အန်တီလှဆိုတာကလည်း အသက်သိပ်ကွာတာမဟုတ်ဘူး။ ရိုသေသမှုနဲ့မို့သာ အန်တီလှခေါ်နေရတာ။ မုဆိုးမပူပူနွေးနွေးလေးကို သနားတာကလည်းပါ၊ သံယောဇဉ်ကလည်း ပိုမိတာမို့ လုပ်ငန်းတွေကို ကိုယ်ဖိရင်ဖိကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေမိသည်။ အန်တီလှကလည်း အိမ်မှာသာနေပြီး လုပ်ငန်းသဘောတွေ သိပ်နားမလည်တာမို့ တောင်သူလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကို ဘကြီးခင်အားပုံအပ်ထားလိုက်သည်။ ဘကြီးခင်ပြောသမျှ တိုင်ပင်သမျှ ခေါင်းညိမ့်သည်။ ဖြူသည်ညိုသည် ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။
ဘကြီးခင်က အန်တီလှတို့အိမ်မှာ တောင်သူဦးစီးလုပ်နေပေမယ့် တခြားတစ်ဖက်မှာ မိသားစုကရှိနေသေးသည်။ ဇနီးကြီးဒေါ်ခ ငုတ်တုတ်ရှိနေသလို သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက်ရှိသည်။ ဒေါ်ခကလည်း အူအူအအမို့ ဘကြီးခင်လုပ်သမျှ ဟုတ်ကဲ့ပဲ။ ဟုတ်ကဲ့မလုပ်လို့လည်းမရဘူး။ ဘကြီးခင်က မထင်မထင်သလို လက်ကပါတက်သည်။ ဒေါ်ခဆိုတာ ဆယ်နှစ်နေလို့ မြို့ပေါ် တစ်ခေါက်ရောက်ဖူးတာ မဟုတ်ဘူး။ ရွာမှာ ခြင်တွေပေါလာတာတောင် တို့ရွာမှာ ခြင်ပေါလာပြီမြို့ဖြစ်တော့မယ် ဟုပြောတက်သည့် အမျိုးအစားထဲကဖြစ်သည်။
ဘကြီးခင် အမျိုးသမီးဒေါ်ခက အကြော်လေးကြော်ပြီး ဘကြီးခင်သမီးကြီး မအေးပိုက်က ရွာထဲလည်ရောင်းသည်။ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ အဆင်ပြေနေတာပဲ။ သည်ကြားထဲ ဘကြီးခင်တို့မိသားစု ခေတ်ကောင်တစ်ခတ်နှင့်ကြုံလိုက်သေးသည်။ အဖြစ်ကသည်လို။
ဘကြီးခင်တို့အိမ်ကို ဘယ်ကနေဘယ်လို ရောက်လာမှန်းမသိသည့် ဘဲကလေးတစ်ကောင်ရှိသည်။ ဘဲက မန်ဒါလီဘဲအမျိုးအစား။ ခွေးလိုက်ဆွဲပြီးမျက်စိလည် လမ်းမှားပြီးရောက်လာခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ မန်ဒါလီဘဲကလေး အိမ်မပြန်ပဲ ဘကြီးခင်တို့အိမ်မှာ ပျော်နေသည်။ ဘကြီးခင်က အိမ်နောက်ဘက်ခြံထဲမှာ ကန်လေးတစ်ကန်တူးပေးထားသည်။
ဘကြီးခင်က တိုင်းရင်းဆေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီးလည်း တော်တော်လေးကျွမ်းဝင်
နှံ့စပ်သည်။ ရွာထဲမှာ ဘယ်ဆရာဝန် ဘယ်ဆေွးမှုးမှ ကုသလို့မရလို့လက်လျှော့သွားသည့် လူနာတစ်ယောက်ကိုတောင်းပြီး ဘကြီးခင် ဆေးကုပေးဖူးသည်။ လူနာရှင်တွေကလည်း လက်လွတ်ရတော့မှာမို့ မျက်ရည်စမ်းစမ်း စမ်းစမ်းဖြစ်နပြီဖြစ်သည်။ ဘကြီးခင်က လူနာအခြေအနေကြည့်ပြီး သဘော်ရွက်ကိုထောင်းပြီး သုံးခွက်တစ်ခွက်တင် ကြိုခိုင်းသည်။ သူစုဆောင်းတားသည့် ဆေးတစ်ချို့ထည့်ပြီး လူနာကိုတိုက်သည်။ ခဏနေတော့ အေးစက်နေသည့်လူနာက အပူတွေတက်ပြီး တဟင်းဟင်း အသံပေးသည်။ တစ်ပတ်လေက်နေတော့လူနာသက်သာသွားသည်။
ဘကြီးခင် တမဟုတ်ချင်း ဆေးဆရာအဖြစ် ကြော်ကြားသွားသည်။ ရွာနီးချုပ်စပ်က လူနာတော်တော်များများ ဘကြီးခင်ဆီ ဆေးကုဖို့ရောက်လာကြသည်။ ဘကြီးခင်က ရောဂါအခြေအနေကြည့်ပြီး သင့်တော်မည့်ဆေးတွေပေးသည်။ ဖြစ်ချင်တော့ ဘကြီးခင်တို့မွေးထားသည့် မန်ဒါလီဘဲထီးလေးက အရွယ်ရောက်လာသည်။ ဘဲမမရှိတော့ တဂွီးဂွီးနှင့် ဖိုသံပေးသည်။ အနီးနားမှာရှိသည့် ခွေးတွေလူတွေကို နှုတ်သီးဖြင့်လိုက်ထိုး၏။ နှုတ်သီးနှင့်လိုက်အဆိတ်ခံရသည့် လူနာတွေက မန်ဒါလီနှုတ်သီးနှင့်ဆိတ်လို့ ရောဂါတွေ ပျောက်တာပါဟု ဖြစ်ကုန်ကြရော။ မန်ဒါလီလေးဟာနေရင်းထိုင်ရင်း ဓာတ်ဘဲကြီး ဓာတ်ဘဲကြီးနှင့် နာမည်ကြီးသွားရှာတာ။ ဘကြီးခင်လည်း သည်လောက်အတွေးအခေါ် နုံနသည့် လူတွေ သူတို့ထိုက်နှင့်သူတို့ကံ နေပေလေ့စေဟု ပေယျာလကန် ပစ်ထားလိုက်သည်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဓာတ်ဘဲကြီးဆီကို ဆေးလာကုတဲ့သူတွေများ နည်းတာမဟုတ်ဘူး။ ပိုက်ဆံတွေလည်းရလိုက်တာ သောက်သောက်လဲပဲ။
ဘကြီးခင်က နက္ခတ်ဗေဒင်ကိုလည်း စိတ်ဝင်စားတော့ တစ်ချို့ကိစ္စတွေမှာ ကြိုသိနေသလိုပဲ။ သူ့သားငယ် ကိုကျော်ထွေးက ပြောစကားနားမထောက်ပဲ တောင်ပေါက်ရိုးမှာ ငါးသွားဖမ်းတာ ဆည်ထဲပိတ်မိပြီးရေနစ်သေပါလေရော။ ဘကြီးခင်ခဗျာ သူပြောထားရက်နှင့် အခုလိုဖြစ်တာ ရင်နာလို့မဆုံးဘူး။
ဘကြီးခင်အမျိုးသမီးဒေါ်ခကြီး သွေးဆုံးကိုင်ပြီး ဆုံးသွားတော့ ဘကြီးခင်လည်း အန်တီလှဆီ အပြီးအပိုင်ပြောင်းနေလိုက်တော့သည်။ ရွာထဲရပ်ထဲကတော့ နည်းနည်းပါးပါး ပြောကြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘကြီးခင်ကတော့ ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ကိုယ်ကောင်းလျှင် ခေါင်းဘယ်မှမရွေ့ဘူးဟု တွေးသည်။
အရင်တုန်းကရပ်ထဲရွာထဲ သာရေးနာရေးကိစ္စများရှိလျှင် သံဃာစင်ပေါ်သွားပြီး ဘာသာရေးကိစ္စလေးဆွေးနွေးတတ်သည်။ ကိုယ်သိသလောက် တက်သ လာက်ဖတ်မှတ်ထားတာလေတွေဆွေးနွေးဖြစ်သည်။ ခက်တာက တစ်ချို့လူတွေမှာ ဆွေးနွေးဖို့ထက် ငြင်းခုံကြဖို့ အားသန်နေတာကများသည်။ ကိုယ်ကဖြူလျှင် သူကမည်းချင်သည်။ ကိုယ်က အမှားဆိုလျှင် သူကမှန်ချင်သည်။ ဘကြီးခင် သဘောပေါက်ထားတာက ကိုယ်ကလည်းမှားပြီးသူတစ်ပါးလည်း မှန်နိုင်သည်။ ကိုယ့်အတွေးအခေါ်ဆိုတာတောင် မနေ့ကနှင့်သည်နေ့ တူတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အမြဲပြောင်းလဲနေတာ။ ကိုယ်တောင်မှားနိုင်သေးတာ၊ သူတစ်ပါးအမှားကိုလည်း သည်းခံခွင့်လွှတ်တတ်ရမည်။ အမှားသိလျှင် အမှန်ရှိသည်။ ဓမ္မကိုသိပြီး အဓမ္မကိုစွန့်ခွါလျှင် ကမ္ဘာလောကငြိမ်းချမ်းသာယာမည်ဟု ဘကြီးခင်တွေးထင်ထားသည်။
အခုတော့ ငါသာမှန်ပြီး တစ်ပါးသူ အကုန်မှားသည် ဟုအယူအဆရှိသူများနှင့် သံဃာစင်ပေါ်မှာ ဘကြီးခင်စကားမပြောချင်တော့။ လူထူထူရှိလျှင် လက်ရှောင်နေချင်သည်။ ညမိုးလေချုပ်လို့ အလင်းရောင်ပျောက်ထာနှင့် အိမ်ရှေ့ကွပ်ပျစ်မှာထွက်ထိုင်သည်။ ကွပ်ပျစ်မှာထွက်ထိုင်သည်။ ကွပ်ပျစ်မှာမလှဲချင်လည်း ကွပ်ပျစ်ဘေးက ထန်းလက်ကုလားထိုင်မှာကြယ်ကြွေတွေကို စိတ်ဝင်တစားလိုက်ငေး၏။ ကွပ်ပျစ်ပေါ်မှာ အန်တီလှ လာချထားပေးသည့် လက်ဖက်သုတ်နှင့် မြေပဲကြော်ကို ၀ါးသည်။ ရေနွေးကြမ်းခါးခါးတစ်ခွက်ကို အရသာခံသောက်သည်။ ကြယ်တွေကိုကြည့်သည်။
ညစဉ်ညတိုင်း ကြယ်တွေကိုကြည့်ရင်း ဘကြီးခင် စကြာဝဌာကြီးကို စိတ်ဝင်စားစပြုလာ၏။ အဇဌာကောင်းကင်၏ ထူးဆန်းထွေလာဖြစ်စဉ်များကို တွေးဆဆင်ခြင်ကြည့်ချင်သည်။ စကြာဝဌာနှင့်ပတ်သတ်တော ကျမ်းကြီးကျမ်းငယ်များကို ရှာဖွေဖတ်ရှု့သည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်းတစ်ခုက
မူလကနဦးအချိန်ကာလ ၌စကြာဝဌာ တစ်ခုလုံးအမှောင်ထုကြီးဖြင့် ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိ၏။ ထို့နောက်ရေလွှာထုကြီးဖြင့် ပျံ့နှံ့စိမ့်ယိုလာ၏။ ထိုမှတစ်ဆင့် အခွံအကာနှစ်မျိုးပါဝင်သော ရွှေဥ ကြီးတစ်လုံး ပေါက်ဖွားလာသည်။ အခွံအကာနှစ်မျိုးမှာ ဘူမိမြေ ကမ္ဘာနှင့်အဇဌာကောင်းကင်ပြင်ကျယ်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ အခွံအကာမှနေမျက်စိလမျက်စိရှင်ဖန်ဆင်းသူဗြဟ္မာကြီးပေါက်ဖွားလာသည် ဟုဆိုသည်။ ကိုယ်မသိသေးတာကို သိရှိရ ၍ ဘကြီးခင် ထိုကျမ်းကိုစိတ်ဝင်စာသွားသည်။
ပရနေသည် သကြာသဌာ၏ ရုပ်ဒြပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းအကောင်အထည်များကို ဖြစ်စေသည်။ အနုမြူ၏ အစကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ ကြံစည်ခဲ့သော ပညာရှိ ကန်ဓာဒ ကမူ စကြာဝဋ္ဌာရုပ်ဒြပ်အကောင်အထည်သည် အရာဝတ္ထုကိုးမျိုး ဒါရဗျ မှစတင်ဖြစ်ပေါ်လာည်ဟုဆို၏။ အချို့က စကြာဝဋ္ဌာသည် ဖန်ဆင်းရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်မဟုတ်။ ပင်ကိုယ်သတ္တိပါအရာဝတ္ထုများ၏ ဂုဏ်သတ္တိကြောင့် စကြာဝဋ္ဌာသည် ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိရသည်ဟု ဆိုသည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်စကြာဝဋ္ဌာသည် သတ္တ၀ါတို့၏ ပြုလုပ်ခဲ့သော ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံနှင့် မကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတရားများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသည်ဟု ဆိုသူကလည်းဆိုကြလေသည်။
စကြာဝဋ္ဌာ၏ ဖြစ်စဉ်များကို လေ့လာရင်းကိုယ်လိုချင်တာရသော ကလေးတစ်ယောက်လို ဘကြီးခင် ပျော်မြူးနေတက်၏။ စကြာဝဋ္ဌာနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဇောတိသသျှတ္တရခေါ် နက္ခတ္တဗေဒ သိပ္ပံပညာရပ်များကိုလည်းလေ့လာဖြစ်ခဲ့သေးသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်လိုလက်ရှိ ဗိုင်းငင်နေသည့် အန်တီလှနားသွားထိုင်ပြီး မလှရေ သည်နှစ် နေ၊ လသွားရာလမ်းကြောင်းတွေမှန်ကန်တည့်မှတ်နေတယ်။ မိုးလေ၀သမှန်ပြီး ရာသီဥတုတွေကောင်းလိမ့်မယ်။ မိုးဦးစောမယ်။ ဆေးပျိုးတွေ စောစောကျဲမှဖြစ်မယ်ဟု ပြောတက်သည်။
ညစဉ်ညတိုင်း ကောင်းကင်ကြီးကိုထိုင်ကြည့်နေတော့ ဘကြီးခင်တစ်ယောက် ကောင်းကင်ကြီးကို အလွတ်ရနေတော့သည်။ ကြယ်တွေ၊ နက္ခတာရာတွေ၏ အရွေ့ကို ဘကြီးခင်လိုက်မှတ်သည်။ တစ်ချို့ကြယ်တွေကတစ်ခါတစ်ရံလင်းလတ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ မှုန်နေတတမ၏။ နဂါးငွေ့တန်းထဲမှ ကြယ်အပျောက်အရှတွေကို ဂရုတစိုက်လေ့လာသည်။ သောကြာကြယ်ကြီးလနှင့်နီးလာပြီလား ဘကြီးခင်စိုးတထိတ်ထိတ်ကြည့်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံကလေးဆန်ဆန် ဘကြီးခင်တွေးကြည့်၏။
သည်ကောင်းကင်ကြီးပဲ ညတိုင်းထိုင်ကြည့်နေရတာ။ ညကလည်းသည် ည ပဲ။ လ ကလည်းသည် လပဲ ။ ကမ္ဘာ၏ တစ်ခြားတစ်ဖက်ခြမ်းက ည နှင့်ကောင်းကင်ကြီးများ ကြည့်ခွင့်ရခဲ့ရင်……………………..
ဘကြီးခင် အဲသလိုပြောတော့ အရူးအပေါတစ်ယောက်လို ၀ိုင်းလှောင်ကြသည်။ ဘကြီးခင်က သူဖြစ်ချင်တာကို သူပြောသည်။ ဘကြီးခင်မှာ သားရေဖုံးနှင့် မှတ်စုစာအုပ်လေးရှိသည်။ ကြယ်တွေကို မှတ်တမ်းပြုစုထားသည်။ ဘယ်နေ့ ဘယ်နက္ခတ်မှာ ဘယ်ကြယ်ကြွေတာ။ ဘယ်အရပ်ဒေသက ဘယ်ကြယ်ကြွေရင်ဘာတွေဖြစ်တတ်သည်။
တစ်ရက်တော့ ကောင်းကင်ကြီးကို ဘကြီးခင် စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်သည်။ ညကမှောင်တော့ ကြယ်တွေကပိုလင်းနေသလားထင်ရ၏။ အင်္ဂါဂြိုလ်က မာဃနက္ခတ်အလယ်ကို ဖြတ်သန်းပြီး ၀ိသာခါနက္ခတ်ကိုပါ ထပ်မံဖြတ်သန်းနေသည်။ အဲဒီအနေအထားကို ဘကြီးခင် မကြိုက်ဘူးဖြစ်နေသည်။ ဘကြီးခင် လင်္ကာတိုလေးတစ်ပုဒ်ကို မရေရွတ်စဖူးရေရွတ်သည်။
အမ္ဘုမ္မာ ခြေဆင်း ခံရစ်တော့ မင်း….
အဲသည်ညမှာပဲ မထင်မှတ်ပဲ ဘကြီးခင်ရုတ်တရက်ဆုံးပါးသွားခဲ့သည်။
ကြယ်ကြေစာရင်းစာအုပ်ကလေးက သခင်မဲ့နေခဲ့သည်။ သည်စာအုပ်မှာ ကြယ်ကြွေတွေကို ဘယ်သူမှတ်တမ်းတင်ရစ်မှာလဲ။ ။
Posted by ထက်နိုင် at 6:55 AM0comments
ကျွန်တော်အိမ်ကထွက်လာတော့ မိုးကတဖွဲဖွဲ ကျနေသည်။ စောစောလေးကတော့ ရာသီဥတုက လင်းလင်းချင်းချင်း သာသာယာယာပဲ ရှိနေခဲ့သေးသည်။ အခုမှ ရုတ်တရက် ဗြုန်းစားကြီးအပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် တစ်ပတ်လောက်က ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်မြို့ကလေးမှာကလေးတွေပင်လယ်ရေလှိုင်းစီးကြသည်။ကျွန်တော်တို့က ငပလီသွားစရာမလိုတော့ဘူး။ ချောင်းသာလည်းသွားစရာမလိုတော့ဘူး။ကျွန်တော့် သားအကြီးကောင်က သူ့သူငယ်ချင်းအိမ်က ကားကျွတ်ကြီးယူပြီး ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို လှိုင်းစီးသည်။ကလေးဆိုတာကတော့ ကလေးလိုပျော်ဖို့သိတာကိုး။
တောင်တန်းတွေပေါ်မှာ တိမ်တွေက ညှိ့မည်းတက်လာနေသည်။ ဒါဟာ မိုးသည်းသည်းမည်းမည်းရွာမည့် အဓိပ္ပ္ပ္ပာယ်ပဲ။ ကျွန်တော်က စိုးရိမ်ထိတ်လန့်စွာနှင့် ရေမြောင်းလေးဆီ ခပ်သွက်သွက် လျှောက်လိုက်သည်။ ကျွန်တော်ရေမြောင်လေးဆီရောက်တော့ ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေ တော်တော်လေးစုမိနေပြီ။ မြောင်းပေါက်ကိုဖာထေးသည့် သဲအိတ်တွေကလှုပ်ချင်လာပြီ။ လူတွေ စိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်အသေအချာ သိပါသည်။ လူတွေက စိုးရိမ်နေတာကလွှဲလို့ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့ကြတော့လည်း ၀န်လေးနေပြန်သည်။ ကျွန်တော် ပတ်ဝန်းကျင်ကို စောင်းငဲ့ကြည့်ပြီးအသက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက် ရှုပစ်လိုက်၏။ ကျွန်တော်အသက်ရှုပြီး သက်ပြင်းချလိုက်သည့်အချိန်မှာ လူတစ်ယောက်က ကျွန်တော့် ကို ဆွဲခေါ်သွားသည်။ ဘာကိစ္စ္စရှိလို့ လဲဒ ဒခင်ဗျားဘာလို့အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှုပစ်လိုက်တာလဲ၊ ကျွန်တော်အံ့သြ တုန်လှုပ်သွားသည်။ ဒကျွန်တော် အသက်ရှုခွင့် မရှိဘူးလား။ အသက်မရှုရင် ကျွန်တော် ရပ်တန့်သွားမှာပေါ့ဒ ဓခင်ဗျားနှာခေါင်းက လေတွေ စုပ်ယူလိုက်လို့ လေဟာနယ်ဖြစ်ပြီး မြောင်းကျိုးသွားရင် ခင်ဗျားမှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားမ မေ့ပါနဲ့။ဓ ကျွန်တော့ကိုအမိန့်ပေးနေတဲ့သူက ဒေါသတွေနှင့် ခါရမ်းနေသည်။
ကျွန်တော် သည်နေရာမှာ ဆက်နေလို့မဖြစ်နိုင်တော့တာနှင့်မြို့ကလေး၏ တစ်ခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုဆီ ခြေလှမ်းကိုရွှေ့ လိုက်၏။ မိုးတိမ်မည်းတွေ သည်းသည်းမည်းမည်း ပြိုမကျခင် လမ်းမပေါ် ကျွန်တော်ခပ်သွက်သွက် လျှောက်သည်။ လူတွေက ဘာမှမရှိသည့် လမ်းမပေါ် စိတ်ဝင်တစား ငေးမောနေကြသည်။သူတို့အကြည့်တွေက လမ်းမပေါ် မှာတစ်စုံတရာကို ပိုက်စိပ်တိုက်ရှာဖွေ သလိုမျိုး အသေးစိတ်ဆန်လွန်းလှ၏။ မိုးတိမ်မည်းတွေက ကျွန်တော်မျှော်လင့် ထားသလို ပြိုကျမလာခဲ့ပါဘူး။ ရာသီဥတုက ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့ခန္စ္စ္ဓာကိုယ်ပေါ် သို့ နေရောင်ခြည်က ထိုးဆိုက်ကျလာခဲ့သည်။ ကျွန်တော်က မြို့ကလေးကို ဖြတ်ပြီးလမ်းလျှောက်နေဆဲပါ။ ခရီးတစ်ခုကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကျွန်တော် လှမ်းလျှောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် ထာပွဲတစ်ခုကို ဖြတ်သည်။ ဈေးတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းအပြီးမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နှင့် စာအုပ်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ကိုတွေ့သည်။ လူတွေက လူထူးဆန်းတစ်ယောက်လို ကျွန်တော့်ကို စုပြုံကြည့်နေကြသည်။တစ်ချို့အကြည့်တွေက အံ့သြရိပ်ဆင်နေသလို တစ်ချို့အကြည့်တွေက ဒေါသအရိပ်အငွေ့တွေ သန်းနေသည်။ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်နေသည့် လူအုပ်ကို ကျွန်တော်လက်တွေ ဝှေ့ရမ်းပြလိုက်သည်။ ဟေး... ခနဲ ကျွန်တော် အသံပေးသည်။ ငြိမ်သက်နေသည့် ကန်ရေပြင်လို ဘာတုန့်ပြန်သံမှ ပြန်မလာဘူး။
ကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်ပါပြီ။ သူတို့က ကျွန်တော့်ကို လူထူးဆန်းတစ်ယောက်အဖြစ် ကြည့်ရှုနေခြင်း ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ သူတို့က လူယောင်ဆောင်နေကြပေမယ့်လူတွေ မဟုတ်ကြဘူး လူတစ်ယောက်၏ အစစ်မှန်ဘ၀ကို သူတို့မရကြဘူး။ မျက်လုံး တွေပါပေမယ့် မမြင်ရဘူး။ မျက်လုံးယောင်ဆောင်နေကြတာ။ နားတွေပါပေမယ့် မကြားရဘူး။ နားယောင်ဆောင်နေကြတာ။ ပါးစပ်တွေပါပေမယ့် မပြောတတ်ဘူး ပါးစပ်ယောင်ဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ လမ်းချိုးအကွေ့ ရောက်တော့ချောက်ကမ်းပါးကြီးတစ်ခုက ဆီးကြိုနေသည်။ ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမှာလား။ လှည့် ပြန်ရမှာလား။
Posted by ထက်နိုင် at 6:53 AM0comments
မန္တလေးတိုင်း မြင်းခြံမြို့နယ် တလုပ်မြို့ကျေးရွာတွင် အဖ ဦးအောင်ကြည်၊ အမိ ဒေါ်ညွန့်ဆွေ တို့မှ ၁၉၆၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ (၆)ရက် ကြာသပတေးနေ့တွင် မွေးဖွား။ မွေးချင်း (၇) ယောက်တွင် ဒုတိယ။ အမည်အရင်း ကိုမင်းနိုင်။ တလုပ်မြို့ အ.ထ.က မှ အခြေခံပညာ အထက်တန်းအောင်။ မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှ သမိုင်းအဓိကဖြင့် ၀ိဇာဘွဲ့ရရှိ ။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် စာပေနယ်ရောက်ရှိ။ ပထမဆုံးဝတ္ထုတိုမှာ ၁၉၉၉ ခုနှစ် ဧပြီလထုတ် မြားနတ်မောင် မင်္ဂလာမဂ္ဂဇင်းပါ ကမ်းနားသစ်ပင် ၀တ္ထုတိုဖြစ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိပါ (လူမှုစိတ်ပညာစာအုပ်)နှင့် အလင်းပွင့်ကြယ်ကြွေ ၀တ္ထုတိုပေါင်းချုပ် ထုတ်ဝေခဲ့။ မိုးကုတ်မြို့တွင်နေထိုင်ပြီး ၀တ္ထုတိုများ၊ အက်ဆေးများ၊ ဟာသ၀တ္ထုတိုများ ရေးသားလျှက်ရှိ။